ချစ်လို့ပြောစွာပါ ----------- နွမ်းမလားခင် အလှမာန...
တော်ဝင်သူရို. သွီးသစ္စာ (အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည်)
လခြမ်းချေ အချေခါ.. "လခြမ်းချေ" ကို ရာဟုဖမ်း...
ဆင်ဒမော်( ဆင်တက်မော်) တောင် သိုက်
ကြက်ပေါင် တိုက်ပီးနိန်ကတ်တေ .....။
ထောင်း နိန်စွာလေ ချစ်ချေ ......
အလွမ်းတိ ခြောက်ပိဿာ နန့်
Posted by KingMarayu at 09:440comments
ဇာလူက စတိုက်လိုက်တေမီးလေ့ မသိ၊ သဘောက်ဇာတော တစ်တောလုံးလောင်ပါလားသည်။ ဒေသဘောက်ဇာတော ဆုံးလျှင် မြောက်ဘက်အစွန်းက ကောက်ရိုးပုံတိကို မီးစွဲလောင်လိမ့်မည်။ ကောက်ရိုးပုံတိ မီးစွဲလောက်ကျွမ်းလျှင် ပြာပုံဘ၀ ကိုချက်
ချင်းပြောင်းလဲလားသည်။ ပြာကို မိုးခါ ကျွဲမစား၊ အခင်ကြီး သံကြီးအောင် တစ်ယောက် ချွဲတိအလုံးလိုက်ကျလျက်၊ ဇွဲမချောဘဲ အိမ်းလှေးခက်နှင့် မီးကို ငြိမ်းသတ်ရန်ကြိုးစားနိန်သည်။ ကြည့်ရစွာ ရင်ဆာဖို့ ကောင်းပါသည်။ အငြိုးတကြီးနှင့် ဟြိ့ကို တိုးတိုး လာသော ဒေ မီးဟုန်ကြီးကို အိမ်လှေးခက်ချေတစ်ခက်နှင့် ဘဇောင်ဘင် အန်တု နိုင်ပါဖို့လေ့......။ ဂကောင်းမကြာလိုက် အခင်ကြီး သံကြီးအောင် အိမ်လှေးခက်ကို မီးဟုန်ကြီးက ဒေါသတကြီးနှင့် ၀ါးမျိုးလိုက်သည်။
အခင်ကြီးသံကြီးအောင်တစ်ယောက် မိမိ အသက်ကို ဖက်နှင့်ထုပ်လျက် မီးတောကြီးထဲက ပြီးလွှားထွက်လာလိုက်ရသည်။ ကံကောင်းသည် ခန္ဒာကို မီးမစွဲလီ။ လနှင့်ကြာအောင် ကျင်ကိုင်ခရသော သူပိုင်ဆိုင်သော ကောက်ရိုးပုံကြီး ၂ လုံး ၂ မိနစ်အတွင်း ပြာဘုံအဖြစ်သို့ ပြောင်း
လဲလားသည်။ အခင်ကြီး သံကြီးအောင် တစ်ယောက် မျက်ရည်ကိုသုတ်၊ လက်သီးဆုပ်လျက် အားမတန်လို့ မာန်လျော့လိုက်ရသည်။ ဇာတ်လမ်းကို ဒေလောက်နှင့် မတန်းသိမ်ပါ။ မိသားစုကို လုပ်ကျွေးနိန်သော သူ့ကျွဲတစ်ခြံ အသက်ဆက်ရေး အခင်ကြီးတစ်ယောက် သင်္ချာတွက်ရလီသည်။
ဘ၀သည် အလွန်ဘင်ဆန်းကြယ်ပါသည်။ နားမလည်နိုင်မှုနှင့်လဲပြည့်နိန်ပါသည်။ ကံသည် အလုပ်ဟု ဘုရားကပြောပါသည်။ ဆင်းရဲလို့ မလှုနိုင်၊ မလှုနိုင်လို့ ဆင်းရဲသည်ဟု ဘုန်းကြီးတိ ဆုံးမတတ်သည်။ တစ်ခါတလီ ကံသည် အလွန်ဘင် နားလည်ရခက်တတ်ပြီး၊ အလုပ်ကို တနားလေ့ မငြိမ်းအောင် လုပ်နိန်ရေ လှုတိကိုဘင် ခြီနှုန်းသတ်ပနာ ဆင်းရဲအောင်ဖန်တီးပါသည်။ ကံ၏ ခဗြားသတ်၊ သရော်မှုအောင်တွင် ရခိုင်ပြည်ဟိ လောင်ဗွန်းရွှာက ရွှာသားတိ အလှုးအလဲခံရသည်။ မိုးထဖ (၅) နာရီမှ ထလျက် ညနိန် ၇ နာရီ အချိန်ထိ မနားမနိန် အလုပ်လုပ်ဂေလေ့ ဒေရွှာသားတိ ထမင်းတစ်လုပ်လုပ်ကို အနို်င်နိုင်စား၍ဘ၀ ဆက်ရသော အဖြစ်ကိုကြည့်လျင် ကံဆိုသည်မှာ အလုပ်ဟု ဆိုသော ဘုရားစကားကို တစ်စိချေလောက် ဘ၀င်မကျချင်ပါ။
ကျောင်းနိန်ပျော်၍စာတော်ရမည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော မြန်မာအစိုးရပညာရေး ဆောင်ပိုဒ်သည် ဒါချေခိုင်ရို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ရို့အတွက် အဖရိကတိုက်က လှုရိုင်းတိကို စတားဘတ်(ခ်) ကော်ဖီအကြောင်းလားပြောခီစွာနှင့်တူသည်။ ကြွေးကြော်ခြင်းသည် အာဏာဟိလူတန်းစားတိအတွက် ပါးစက ပြုတ်ကျလာသော အသီကောင် သနားခါးလူ ဖော်မျူလာတစ်မျိူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၃၈ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အပှုချိန်သည် ဖဲသာဟိ၊ပညာတတ်လူတန်းစားတိအတွက် သီအောင်ဘင်
ပှုပြင်းသော်လည်း ဒါချေခိုင်ရို့မောင်နှမရို့အတွက် အိုအေစစ်ကို ယောက်ဖခေါ်သည့် ဖော်မျူလာ တစ်မျိူးဖြစ်သည်။ တတောက်ပှုသော နီရောင်အောက်တွင် ရီခမ်းငါးဟြာရသော လူသားတစ်ယောက် ၀မ်းရေးသည် ၁ နာရီလုပ်လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာရသော ရခိုင်သားတစ်ယောက် ၀မ်းရေးထက် ဒဿနဆန်သည်ဆိုလျင် အကျွန်မှားပါဖို့လား။ နွီရာသီ ရီခန်းငါးဟြာရသော အလုပ်သည် ကမ္ဘာလောက် အန္တရာယ်များပါသည်။ အခိုက်မတန့်လျင် မြွီကိုက်၍ရပ်စောက် ချောလားနိုင်ပါသည်။
သရီဖိနပ်ဝယ်ဝတ်ရန် မြန်မာအစိုးရမှ သတင်းစာက တိုက်တွန်းနိန်သော်လည်း သတင်းစာဆိုသည်မှာ ဒါချေခိုင်ရို့အတွက် ကုလားဘက်မှာ ပဲစိနှင့်ဖက်စားရသော အရာဝတ္ထူတစ်မျိုးသာဖြစ်ပါသည်။ Safety First ဟုဆိုသောစာတန်းသည် ထမင်းကိုထင်းနှင့်ချက်၍ ဘ၀ ဆက်ရသော လူသားတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ပါ။
ရခိုင့်ပင်လယ်အောက်တွင်ရှိနိန်သော သဘဘ၀ ဓာတ်ငွိ့သည် ကပ်စိနည်းသဌေး တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ရီခန်းငါးရှာ၍ အသက်ဆက်ရသော ဒါချေခိုင်ရို့ မောင်နှမတိကို ရခိုင်သဘာဝ အရင်းအမြစ်များသည် အဖတ်မလုပ်ကတ်ပါ။
ဘ၀သည် အလွန်ဘင်ဆန်းကြယ်ပါသည်။ နားမလည်နိုင်မှုနှင့်လဲပြည့်နိန်ပါသည်။ ကံသည် အလုပ်ဟု ဘုရားကပြောပါသည်။ ဆင်းရဲလို့ မလှုနိုင်၊ မလှုနိုင်လို့ ဆင်းရဲသည်ဟု ဘုန်းကြီးတိ ဆုံးမတတ်သည်။ တစ်ခါတလီ ကံသည် အလွန်ဘင် နားလည်ရခက်တတ်ပြီး၊ အလုပ်ကို တနားလေ့ မငြိမ်းအောင် လုပ်နိန်ရေ လှုတိကိုဘင် ခြီနှုန်းသတ်ပနာ ဆင်းရဲအောင်ဖန်တီးပါသည်။
အဖိုး မောင်သံလှု တစ်ယောက် ဒီဇင်ဘာလ အချမ်းတိကို ခြီနှုန်းသတ်ပနာ သူ့လက်စွဲတော်ရင်းတန်းကြီးကို ထမ်းလျက် ကျွဲကူးမြစ်ကမ်းကို ခြီဦးတည့်လာသည်။ ဖိနပ်မစီးနိုင်သော သူခြီထောင်များသည် သံတုန်းပိုင်မာသည်။ ဆီလီစူးနှင့် ဖက်ရန်စူးတိက အဖို့ မောင်သံလှု ခြီထောက်ကို အန်မတုဝံ့ကတ်။" ဆင်လားလမ်းမလို" ဆိုသော စကားပုံသည် လှုသားစင်စစ်ဖြစ်သော အဖိုးမောင်သံလူတွက် မှန်ကန်နိန်သည်ကို အံ့သြစွာတွိရပါသည်။ယင့်လောက်ကိုမဆိုထားဂဲ့ မြစ်ကမ်းနား ကျောက်ဆောင်တိထက် ဓားရို့ပိုင်ထက်နိန်သော ဂြင်းတိကပင် အဖိုးမောင်သံလူ ခြီထောက်ကို အံမတုဝံ့ကတ်ပါ။ ဖဖြိန်းတုန်ပါအောင်ကြောက်ကတ်သည်။ အဖိုးမောင်သံလူသည် ခေါင်းထဲတွင် ရိုးစင်းသော အတွေးတစ်ခုဟိသည်။ ယင်းချင့်မှာ မြစ်ကမ်းနားရောက်လျှင် ဖြားကျလာအောင်စောင့်မည်။ ယင်းပြီးနောက် မြစ်ကမ်းနားတွင် အပြောင်းအပြန် ရင်းတန်းထိုးမည်။ ရလာသော မျိုင်ချေ၊ငါးချေ၊ ပုစွန်ချေရို့ကို သူ့အချစ်တော် ပုန်းကြီးနှင့်ထမ်းလျက်ရွှာပြန်မည်။ ရောက်လျင် ထိုရီသတ္တ၀ါတိကို ရွှာတွင်လည်ရောင်းမည်။ ရောင်းရသောဒင်္ဂါးတိကို သမီးချေရို့ ၊မြီးချေရို့အတွက် ပီးကမ်းမည်။
မီးခွန်တစ်ခု မီးစရာပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဒေအသက်အရွှယ်ရောက်မှ အီးအီးချမ်းချမ်း မနိန်ဘဲနှင့်ဘဇာကြောင်း အချမ်းခံ ရင်းတန်းထိုး ဖဲ့သာဟြာနိန်ပါလေ။ လူသားတိုင်းသည် အသက်အရွှယ်ရလာလျှင် ငြိမ်းချမ်းအီးမြသော ဘ၀အာဟာရကိုခံ စားချင်ပါသည်။ ရခိုင်လူမျိုးဆိုလျှင် အချိန်တန်ဂေ ၀ပုပ်စောင့်၊သီလစောင့်၊မြီးချေ၊မြစ်ချေရို့နှင့် ပပျော်နိန်ယင်း အီးအီးချမ်းချမ်း ဘ၀ဇာတ်သိမ်းလားချင်ပါလိမ့်မည်။ ယေဘင်ဂေလေ့ ဆင်းရဲခြင်းဆိုရေ ရိနာသတ် အဖြစ်ဆိုးက အဖိုးမောင်သံလူကို မျက်နှာမကြည့်ပါ။ယင်းကဲ့သို့ ဘ၀အဟာရ ဖန်းတီးမပီးပါ။ ပဇာကြောင့်ယလောက်ပင် ဆင်းရဲကတ်ပါလေ။ မလှူနိုင်လို့လား၊ ကံကြမ္မာ ခြီနှုန်းသတ်ခြင်းကြောင်းလား၊ မလှူနိုင်လို့ ဆင်းရဲသည်ဟု ဘုန်းကြီးရို့ဆုံးမစကားတိ အကျွန်အသျှေခါကြားဖူးပါသည်။ ကံ၊ကံ ၏ အကျိုးဆက်ရို့အဖြစ် အကျွန်ရို့လူသားရို့နိန်ထိုင် လားလာမှုဖြစ်တည်နိန်သည်ဟုလည်းပြောကတ်ပါသည်။ ကံသည် အလုပ်လို့ ဘုရားကပြောပါသည်။ ကံသည် အလုပ်ဟုဆိုလျှင် တစ်သက်လုံးရရိုးသသား လက်ပေါက်ပါအောင် အလုပ်လာသော ထိုရခိုင်လူမျိုးရို့အား ဆင်းရဲအောင် ထိုကံက ဖန်တီးပါသနည်း။ ဟြိ့ဘ၀က အကျိုးဆက်ကြောင်းပါလာ။ ယပိုင်ဆိုဂေ ဒေကမ္ဘာမှာ ရခိုင်လူရို့ရာ ဟြိ့ဘ၀က မကောင်းမှုလုပ်ခမိလာ အကျွန် မစိုင်းစားတတ်ပါ။ အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရလျှင် ထိုသီအိုရီတိကိုလည်း အကျွန်ယုံကြည်မည်မဟုတ်ပါ။ ဇာပိုင်ပင်ဆိုဆို ဒေဆင်းရဲဆင်းခြင်းသားကောင်းရို့၏ ကလာဂါ နောက်ဘက်တွင် တိကျခိုင်မာရေ အဖြေတစ်ခု အဂွင့် ဟိနိန်မည်မှာ လုံးဝ သေချာပါသည်။
Posted by KingMarayu at 09:41 1 comments
ယူဇနာ အသျူတစ်ရာ က
ငါ နှလုံးသား ...
လ တစ်ရာ ပ လို့..........
ငါ မျိုချ မိနိန်ရေ ဂါ..........
ကောက်ဆရီပင် ချေ တစ်ပင်
ငြိမှာ ကပ် ကပ်လို့ .....................။
Posted by KingMarayu at 18:450comments
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားမှု၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု၊ ခပြားသတ်အာဏာသိမ်းယူမှု များသည် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အား ကင်ဆာလိုက်စားပိုင် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဆားမရ၊ရီမရ ဘရဘရေ ပြိုကွဲမှုတိဘက်ကို ဦးတည်ဇီသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကျဆုံး
နီသည်ကို လိမ်ညာ၍မရနိုင်ပါ။ဘဇာကြောင်းဆိုသော် ထိုအရိပ်အရောင်များသည် ပြည်သူများ၏ မျက်လုံးတွင်ရောင်ပြန်ခတ်နီခြင်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ဘီလီယံမျှသော လူထုသည် ဘရဘရေ ပြိုကွဲမူ၊အရိပ်အန္တရာယ်သန်းနီသော တိုင်းပြည်များတွင်နီထိုင်လျက်ဟိကတ်ပါသည်။
တစ်ချို့သော တိုင်းပြည်ဂေါင်းဆောင်များသည် မိမိရို့၏ တိုင်းပြည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြိုင်ဘက်တိလက်သို့ရီစက်ချထားရပြီး တိုင်းပြည်၏မြို့တော်တိကိုရာ တွယ်ကပ်ထားရသည်။ အစိုးရအများစုသည် ပြည်သူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်တိကိုပင်လုပ်ပီးနိုင်စွမ်းမဟိကတ်ပါ။ လုပ်လဲလုပ်ပီးချင်စိတ်မဟိကတ်ပါ။ အစိုးရအများစုသည် အာဏာအလွဲသုံးစာလုပ်မှု၊ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုများနှင့် ခြီတိုင်ယိုင်နီကတ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ တည်ငြိမ်မှုမဟိသော တိုင်းပြည်သည်တွင်းဆုံးကျမည်လက္ခဏာဘက်ကိုဦးတည်နီသည်။ ထိုသို့သောတိုင်းပြည်များသည် ကမ္ဘာကြီး၏ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်နီသောဗြောက်အိုးစနက်တန်များလည်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့သောတိုင်းပြည်များသည် အကြမ်းဖက်ဝါဒ၊ရာဇ၀တ်ဂိုင်းတိနှင့်မျက်ကန်းနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတိပေါက်လာဇီရန် ကြက်ဥအပှုပီကိရိယာတိနှင့်တူသည်။ ယင်းသို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုသို့သောတိုင်းပြည်များ၏အားနည်းချက်ကို မိမိရို့၏အခွင့်အရေးအထူးအဖြစ်မြင်တတ်ကတ်သည်။ ဥပမာ ပြရလျှင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မတည်မူတိကိုအခွင့်ကောင်းယူလျက် ရခိုင်ပြည်အား နှစ်ပိုင်းပိုင်းရန်ကြံနီသော မူဆလင်အုပ်စု(ရခိုင်အခေါ် ကုလား)၊ဆိုမားလီးယားမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၊အာဖကန်မှာ တာလီဘန် စသည့်အဖွဲများပါဝင်သည်။
ပထ၀ီအနီအထားများသည်လည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည် ဒဏ်ရာရလွယ်၍ မတည်ငြိမ်မူတိဘက်သို့ရပ်စောက်ကျလားဇီနိုင်သည်။ တည်ငြိမ်မှုမဟိသောအိမ်နီချင်းနိုင်ငံများကြောင့်လည်းတိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ အီရတ်စစ်ပွဲများ
ကြောင်း ဒုက္ခသည်အညာရီပေါက်မူများကိုဆီရီးယား နိုင်ငံကခံစားသည်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အကျွန်ရို့နှင့်အပါးဆုံးဥပမာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းသို့ မြန်မာ၊ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအညာရီပေါက်မှုဖြစ်သည်။ လူဦးရေအလွန်တရာများပြားလှသော ဘိန်းကလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ
သည် အထူးစပါယ်ချယ်စိန်ခေါ်မှုတ်ိကိုရင်ဆိုင်နီရသည်။ အကျိုးဆက်များအဖြစ် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကိုအကျွန်ရို့ရခိုင်ပြည်ကလည်းခါးစီးခံနီရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ဟိ ချပ်(ဒ်)နိုင်ငံသည်လည်း နိုင်ငံ၏အခြေခံစီးပွာရေးမှုတိချက်မှတ်ရာတွင် အယှုံးတိနှင့်ရင်ဆိုင်နီရသည်။
ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။ သံယဇာတပေါကြွယ်ဝသော ကမ္ဘာပေါ်ဟိ ရခိုင်ပြည် နှင့် ကွင်ဂို တိုင်းပြည်များသည်ထိပ်တန်းမှအဖယ်ခံထားရသည်။ စွမ်းအင်ကြယ်ဝမှု၊ကျောက်သံပတ္တမြားပေါများခြင်းများသည် တိုင်းပြည်၏ တကိုယ်ကောင်းဆန်သော လှု့မလိုင်အတန်းအစားတိအကြား ဟခရီကျပြိုင်ဆိုင်မူတိဘက်ကိုဦးတည်ဇီကာနောက်ဆုံးတွင် တိုင်းပြည်သယံဇာတကျိန်စာသင့်မှုတိနှင့်ကျင်ကိုင်ကတ်ရသည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကြပ်နီသောအခြေအနီများကြောင်းလည်းတိုင်းပြည်တွင်းပြဿနာများယှုပ်ထွီးစီနိုင်သည်။ အာဖရိကတိုက်၏ထိပ်တန်းငါးနိုင်ငံသည်အကောင်းဆုံး သက်သီဖြစ်သည်။ " ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ရို့ ဆီးဆောက်ကရောက် မြေတိုင်း
တာသတ်မှတ်မူတိစွာ လူမျိုးစုတိအကြား သဘာဝမကျရေ ပြည်နယ်တိဖြစ်ပေါ်ဇီပါရေ" ဟု Fund Of Peace အဖွဲဥက္ကဌ Paulline H.Baker မှပြောသည်။ ယင်းသို့သော နယ်မြေများသည် လူတစ်ဦးစီ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ်ပေါ်လွင်လာမှုနှင့် စစ်မှန်သောအစိုးရ
တစ်ရပ်အဖြစ်ရပ်တည်လာမှုကို အားမပီးဘဲ အာဏာပိုင်များထာဝရဟြင်သန်ရေးကို ဇန်းဘွတ်ကိုင်တတ်သည်။ အဖရိကတိုက်၏တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်သော ဆီနီဂေါ သည်ကိုလိုနီရို့၏အောင်မြင်သော သီတမ်းစာ တစ်ရွက်ဖြစ်သည်။ " သိသာတိုးတက်တေ၊ခေါင်းဆောင်မူတိဟိကေ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရေ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါရေ" ဟု Mr.Baker မှထပ်ပြောသည်။
အဂွင့်ဂွင့်မှန်ပါသည်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ တည်ငြိမ်အီးချမ်းမှုကိုဖန်တီနိုင်ခြင်းသည် အုပ်ချူပ်သူအစိုးရပေါ်တွင်လုံးဝမှုတည်နီပါသည် ဟုနိုင်ငံရေးသိပ္ဖံပညာသျှင် D.College ကပြောပါသည်။ အစိုးရတစ်ရပ်အနိန်ဖြင့် တရားမျှတ၍တိကျခိုင်မာမှန်ကန်
သောမူဝါဒရေးရာများချမှတ်ခြင်းဖြင့် အလားလာဟိသောနိုင်ငံတွင်းရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကိုလင်သျှာဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုတိကိုလျော့ပါးလားစီနိုင်သည်။ ကမ္ဘာဘဏ်နှင့် ကုလသမ္မဂ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များမှ အကူအညီ
ရယူခြင်းသည်လည်း နှမ်းထွက်နှင့်မှန်ချက်ကိုက်ချင်မှကိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယေဘင်ယေကေလေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အိန္ဒယနှင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံများသည် စိတ်လှုပ်သျှားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတွဲများနှင့်အောင်မြင်မှုရနီကတ်သည်ကိုမငြင်းနိုင်ပါ။
အယင်စလိုမဆွဲသင့်ပါ။ ပဇာကြောင့်ဆိုသော် ယင်းပန်းချီကားချပ်သည်အမိုက်ပုံးနှင့်မိတ်ဆက်ရနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ပြူမှုခြင်းကြောင့် အိပ်ပေါက်နှင့်ဖားကောက်ခရသော ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှ ခြောက်နိုင်ငံ၊ခုနှစ်နိုင်ငံတိထဲတွင် အီရတ်နှင့်အာဖကန်နီစတန်နိုင်ငံတိပိုင်မသေချာ မရေရာမူတိနှင့်ထိပ်တိုက်တိုးလားနိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်နိုင်ငံက ဆိုမားလီးယား ပါ။ ပထ၀ီအနိန်အထား၊သမိုင်းဆိုရာနှင့်မျိုးနွယ်ပြဿနာတိနှင့် ကျင်ကိုင်နီရသော ဆိုးမားလီးယားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆွဲဆောင်မူ၏တောင်တဘက်ကိုရောက်နီသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ပါ။
ယေကေလေ့ ဒေနီရာတွင်မီးစရာတစ်ခုပေါ်လာပါသည်။ မိမိ၏ပိုင်နက်အားလုံးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်သော ကိုလုံဘီယာနိုင်ငံ ကျဆုံးနီပါလာ?? ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သွီးထွက်သံယိုသတ်ဖြတ်မူတိနှင့်ခါးသီးစွာရင်ဆိုင်ခရသော ကန်ညာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာကျဆုံးမှုအလားအလာဟိတိုင်ပြည်ဇယား ၂၆ မှ ၂၄ သို့ ဒေနှစ်တွင်ခုံတက်လိုက်သည်။ ယဘင်ကလေ့ ပြောင်မြောက်သော ကင်ညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသျှင်များ၏ထုက္ကန်မှုများသည်တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ကျဆုံးမှုကိုဇာလောက်အာမခံချက်ပီးနိုင်ပါဖို့လဲ။
သတိကြီးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ပညာတတ်များသည် ဆီးဆောက်ကရောက်ဆုံးဖြတ်ချက်တိကို စောင့်ကြည့်နီတတ်ပါသည်။ လူအများစုသည်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာသဘွတ်အူပြဿနာတိကို အလွယ်ချေမိပျောက်တတ်သည်ဟု
ဟာဝါယီသက္ကသိုယ်မှ ပါမောက္ခ Mr.Tarcisius Kabutaulaka ကပြောပါသည်။ "ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တေ အမေရိကန်နိုင်ငံစွာရေ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လို့ ပြာဘုံဘ၀ကနိန် ရုံးထလာရစွာပါ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံတိကိုလည်း အချိန်တိုအတွင်းမှာ
သွီးထွက်သံယိုမှုမဟိဘဲ အကျွန်ရို့ပိုင်နိုးထစီချင်ပါရေ။ အကျွန်ရို့မူဝါဒရေးရာတိကို မွီးစပ်ကြည့်ပြီးကေ လေးဘက်လေးစိက သုံးသပ်ကြည့်စီချင်ပါရေ" လို့ သူကထပ်ပြောခသည်။
နောက်ဆုံးဘိတ်ပြောရမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကျယှုံးနိန်လာ၊မနိန်လာဆိုစွာကို ယင်းနိုင်ငံက ပြည်သူတိအဖြေက အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သူရို့မျက်လုံးတိက "ငါရို့တိစွန့်ပစ်ခံထားရယာ" သို့မဟုတ် " စီရင်ချက်တိ ရှင်သန်လာယာ" ဆိုခကတ်ကေ။
2009,September လထုတ် National Geographic မှ Robert Draper ရွီးသားသော When Things Fall Apart ဆောင်းပါးကို အကျွန်၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များနှင့်ပေါင်စပ်ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by KingMarayu at 17:090comments
Posted by KingMarayu at 20:380comments
နိရက်။........ ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်
အချိန်။...... ။ရခိုင်စံတော်ချိန် မိုးထဖက် ၁၁:၀၀ နာရီ
နီရာ ။...... ။ ရခိုင်ပြည်၊ ဖရုံကာကျွန်း
" ဘာဘာ, မြောက်ဦးကို ဘုရားဖူးလားဖို့ ဆိုကေ သားချေလေ့ လိုက်ချင်ပါရေ။" ၁၀ နှုစ်သားအရွယ် မြတ်မင်ဦး သည် သူ့အဖကို အားကိုးတကြီးနှင့် ခွင့်တောင်းလိုက်သည်။
မြတ်မင်းဦးသည် ရခိုင်ပြည်ဟိ ဖရုံကာကျွန်းထက်ရွာတစ်ရွာတွင် ၁၉၈၀ ခုနှုစ်က
မွီးဖွားသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နိသည် သူ၏ ဆယ်နှစ်ပြည့် မွီးနိဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၃၁ နိတွင် မြောက်ဦးကို ဘုရားဖူးလားမည်ဖြစ်ကြောင့် ရွာလယ်ကောင်ဟိစံပယ်ပင်ကြီးတွင် ကပ်ထားသော ကြော်ငြာစာကို မြတ်မင်းဦးတစ်ယောက်
သူသည် " မြောက်ဦး" ဟုသည့် နာမည်ကြားသည်နှင့် ကြက်သီးတိထလာကာ ရင်ထဲတွင်နာမည်မသိသော ဝေဒနာတစ်ခု ခံစားမိသည်။ မြောက်ဦး ဟုသည့်နာမည်သည် မြတ်မင်ဦး ၆ နှစ်သားလောက်က စကြားဖူးသည်။
ထိုအချိန်က မြတ်မင်းဦး ရို.ရွာတွင် စာဟောဆရာများလာလျက် ရခိုင်သမိုင်းကြောင်းများ ဟောပြောပြလေ့ဟိသည်။
"မြောက်ဦး" ဟုသောမြို့နာမည်ကို ပထမ ဆုံးကြားစနိတွင် မြတ်မင်းဦးသည် အမိသယ်ရင်ခွင်ထက်တွင် ဆို့အောင်ငိုသဖြင့် သူ့အမိသည်
ရခိုင်သမိုင်းကြောင်းဆုံးအောင်နားမထောင်နိုင်ဘဲ ထလားလိုက်ရသည်။ယင်းနောက် ၄၊၅ နှုစ်အတွင်း မြောက်ဦး ဆိုသည်နာမည်နှင့် မြတ်မင်းဦး အသားကျလာသည်။ ရွာသို့ စာဟောဆရာများလာလျှင် မြတ်မင်းဦးသည် သူငယ်ချင်းကစပ်ဖက်တိကို စွန့်ခွာလျက်ဟြိ့ဆုံးမှာထိုင်ကာ နားရွက်မခတ်နိုင်အောင်နားထောင်တတ်သည်။ သူသည် တခြားအသျှေတိနှင့်ကွာခြားသည်မှာ ရခိုင်သမိုင်းအကြောင်းတိပြောလျှင် မျက်လုံးနှစ်လုံးတည်လျှက် ထမင်းမိ ဟင်းမိ နားထောင်လေ့ဟိသည်။ အဂုလေး မြောက်ဦး ဘုရားဖူး ဆိုသည်အသံကိုကြားသည်နှင့် ၁၀နှစ်သားအရွယ် မြတ်မင်းဦးသည် လားဘိုက်ချင်သည့်စိတ်တိနှင့်ကျင်ကိုင်နီရသည်။
" သားချေလေ့ ၁၀ နှစ်ပြည့်ယာ၊ ယင်းနိဆိုကေ၊ အထိမ်းအမှတ်အနီနန့် လာပြဘိုက်ခီ၊ အဖသယ်။" မြတ်မင်းဦးအမိက ၀င်ထောက်ပီးသည်။
မြတ်မင်းဦးအမိသည် သူ့ကို ကိုယ်ဝန်လွယ်ခါက ဆန်းကြယ်သောအိမ်မက်တိမက်ဖူးသည်။ သွီးအိုင်များ၊လူသီ
အလောင်းတိကြားထဲက မင်းဝတ်တံဆာနှင့် မြင်းထက်ကလူတစ်ယောက်၊ ကြီးမားသော ဘုရားပုထိုးတိထဲက လူတိရယ်သံ စသော နိမိတ်တိမြင်မက်သည်။ ယင်းကြောင့်မြတ်မင်းဦးအမိသည်သူမ၏သားတွင်မြောက်ဦးနှင့်ဆက်စပ်မူတစ်ခုခုဟိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နီသည်။
ယေဘင်ယေကေလေ့ မြတ်မင်းဦး အဖသယ်သည် သူ့သားအတွက်စိုးရိမ်သည်။ မြောက်ဦးရောက်သည်နှင့်
တစ်ခုခုဖြစ်လားမှာကြောက်သည်။ ဘဇာကြောင့်ဆိုသော် သူသည် သူ့သား၏ မူမမှန်သော အသျှေစရိုက်ကို အကဲခတ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။အမိသယ်နှင့် မြတ်မင်းဦး နှစ်ယောက်ပေါင်း ပူဆာမူကြောင့်နောက်ဆုံး သူ့သားအဆိုကို သူခွင့်ပြုလိုက်ရသည်။
" အေး ... အေး .. သားချေလေ့ ၁၀ နှုစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနီနန့် ဘာဘာ ခေါ်လားပါမေ ဝေ..သားချေကို" ဆိုသော ခွင့်ပြုချက်ရပြီးနောက်
မြတ်မင်းဦးသည် အလွန်ပျော်လျက် ရွာကြားထဲကို ဖင်ပုပါအောင်ပြီးလားလေသည်။ သူ့ အမိနှင့် အဖသယ်ကလေ့ သားချေကိုကြည့်လိုက် အပြုံးတိကိုယ်စီနှင့်။
မြတ်မင်းဦးရို.ဘုရားဖူးဘုတ်သည် ဂစ္စပနဒီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစုံဆင်းလာသည်။ ဘုတ်ထက် ကလ၀(လော်စပီကာ) က ဦးမောင်သိန်း တေးခြင်းသံ ညံ့ထွက်နီသည်။ ဘုတ်ထက်တွင် ဘုရားဖူးခရီးသယ်တိသည် သူစွာနှင့်သူ အလုပ်သျှပ်နီကတ်သည်။ အသျှေတိ
မြတ်မင်းဦသည် ဦးရစ်တောင် စေတီကို မြင်သည်နှင့် ဘုတ်ဦးဘက်ကို ထွက်လာပြီး တမိတမောကြည့်နီမိသည်။ သူ၏စိတ်ထဲမှာလည်း အယင်ကဒေနီရောက်ကိုရောက်ဖူးပိုင်ခံစားနီရသည်။ မြတ်မင်းဦ ဦးရစ်တော်
စေတီတော်မြတ်ကြီးကို ဦးခိုက်လိုက်ပြီး အဖော်တိဘက်ကို ပြန်လာသည်။ မြို့ဟောင်း ချောင်းကို စ၀င်မိသည်နှင့် မြတ်မင်ဦး ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လာသည်။ မြောက်ဦးကို အယင်ရောက်အောင်မြတ်မင်းဦး ခုန်ဆင်းဘလိုက်ချင်သည်။ မြောက်ဦးဆိပ်ကမ်းကိုဘုတ်
ကပ်သည်နှင့် မြင်မင်းဦးစိတ်ထဲတွင် အိမ်မက်မက်နီပိုင်တွိသည်။
ဆိုက်ကားတိနှင့် ဗန္ဒူလကျောင်းအလား လမ်းတစ်လျောက်လုံးကို မြတ်မင်းဦးအယင် ကရောက်ဖူးနီပိုင်တွိသည်။ ယကေလေ့ သူအတွေးများသည် ရောင်ဝီရောင်ဝါးများသာဖြစ်သည်။ တစ်ခုကိုတတိကကျမပြောပြနိုင်။ သူစိတ်ထဲမှာလေ့ ငိုချင်ပိုင်တွိသည်။ဘုန်းကြီးကျောင်းအရောက်တွင် မြတ်မင်ဦးသည် ကျောင်းတစ်ပတ် ပတ်ကြည့်နီမိသည်။ ရီးကန်ဘေးတွင် မြက်စားနီသောမြင်းနီကြီးအပါးကိုကတ်လျက် လက်နှင့်ပွတ်သတ်နီမိသည်။ မြင်းနီကြီးသည် မြတ်မင်းဦးကို သူနှခေါင်းနှင့်လာနမ်းပြီးချစ်ချင်ဖွယ်အမူအရာပြသည်။
မြတ်မင်းဦး၏ ထူးဆန်းသောအမူအရာတိကို သူအဖက ဓမ္မာရုံကနီအကဲခတ်နီသည်။ မြတ်မင်းဦး၏ မျက်နှာတွင် ကြည်နူးမိအရိပ်တိသန်းနီသည်။
အပြစ်ကင်းသောသူ၏နှမ်းခမ်းချေတိသည် ကန်ရီပြင်ကို ငေးလျက် အပြုံးပန်းချေတိဝီဆာနီသည်။ ကစပ်မက်သော မြတ်မင်းဦးသည် မြောက်ဦးရောက်သည်နှင့် အလွန်ပင်တိတ်ဆိတ်နီသည်။ စကားလေ့ မီးမှပြောသည်။ ယင်းအပြင် တစ်ယောက်တည်နီ
ရစွာကို ခုံမင်တတ်လာသည်။ သူအဖသည် မြတ်မင်းဦတွက် စိုးရိမ်လာမိသည်။
" သားချေ.. မင်းဦး ... ညဇာထမင်းစားဖို့ ပါလတ်ဖိ။ ယာ..ဒေမှာ ငါးခြောက်ချေနန့် ခရမ်းသီးရောချက်စား ကြိုးဘိုက်ခလိုက်ကား.....။ ယေပြီးကေ ညဇာဘက် လမ်းလျှေက်ထွက်ကတ်ဖို့။"
အဖသည်လှမ်းခေါ်သောကြောင့် မြတ်မင်းဦး ဓမ္မာရုံဘက် ခြီဦးလှည့်လာသည်။ ညဇာ ထမင်းစားလိုက်ပြီး မြတ်မင်းဦး သူ့အဖနှင့် မြို့ထဲလှမ်းလျှောက်ထွက်လာသည်။ ဘုရားပုထိုးတိဟြိ့နားရောက်လျှင် မြတ်မင်ဦးသည် ခြီစုံရပ်လျက် ငှေးကြည့်နီခြင်းကြောင့် သူ့အဖက လက်ဆွဲလျှေက်နီရသည်။ ညဈီး၌တနားပတ်ကြည့်လျက်အမှောင်ထုကြီးစိုးလာခြင်းကြောင့် သူရို.သားအဖ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ပြန်လာကတ်သည်။ မိုးထခါ ဘုရားဖူဖို့ အစောကြီးထရဖို့ဟိသိမ့်သည်။
မြတ်မင်းဦးသည် ဓမ္မာရုံေ၇ာက်သည်နှင့် အသျှေပီပီ ချက်ချင်းအိပ်ပါလားသည်။ ညဉ့်မသန်းခေါင် အရောက်တွင်
"နှမချေ၊ နှမချေ...။ မောင်ကြီး.. မောင်ကြီး.. လိုက်လာဖို့"
ဟုအော်ယောင်လီရာ ဓမ္မာရုံတစ်ခုလုံးနိုးကျသည်။မိုးလင်းသည်နှင့် ခြီကျင်ဘုရားဖူးအစီစဉ်စသည်။ မြတ်မင်းဦးသည် သူ့အဖော်တိနှင့်မနီဘဲ ဟြိ့က ဦးဆောင်လျှောက်နီသည်။ သူ၏စိတ်
ထဲတွင် ဒေနီရာ ဒေလမ်းတိကို ရောက်ဖူးနီပိုင်တွိသည်။
ဘုရားဖူးခရီးသည်များသည် ပထမဆုံး သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှစကာ၊ ရခိုင်တန်ခိုးကြီးများဖြစ်သော ထုက္ကသိမ်၊ အံတော်၊လေးမျက်နှာ၊ လောင်ပွန်းပြောက်၊အနော်မာ၊ ဓာတ်ရွေဂူ၊ နှင့်မာန်ငါးပါး
အစုံဖူးကတ်သည်။ သူရို.သည် ဘားမီး ဘားကရား ဂူကိုလေ့ရောက်သည်။ ဖိုးခေါင်တောင်ထက်သို့တတ်လျက် မြောက်ဦးရှုခင်းကို ခံစားကတ်သည်။ ညနီ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်အချိန်တွင် ဘုရားဖူးအဖွဲဘုတ်ဆိတ်ကိုဆင်းဖို့ ဘုန်ကြီးကျောင်းကို ပြန်လာကတ်ရန် ပြင်ကတ်သည်။ တစ်ညအိပ်ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဖြစ်သဖြင့် ည ၅နာရီတွင်ဘုတ်စထွက်မည်ဖြစ်သည်။ယင်းအချိန်တွင် မြတ်မင်းဦးသည် ဗြန်းနှင့် အဖသည်ကို တောင်းဆိုမူတစ်ခုပြုလာသည်။
" ဘာဘာ ..သားချေ.. ကိုးသောင်းဘုရားကို လားချင်ရေ။ သားချေကို ကျေးဇုပြုပြီးလိုက်ပို့ပီးပါ" ။
ဟုတ်ပါသည်။ ဒေဘုရားဖူးအဖွဲ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးကို လားမဖူးကတ်ပါ။ ပဇာကြောင်းဆိုသော် ယင်းပုထိုးတော်ကြီးတွင်တောတိယောက်လျက်ဟိပြီး ကင်းမြွီများပင် ခိုကောင်းနီသည်ဟု မြို့ခံများကပြောကတ်ပါသည်။ " အဝေး သားချေ မဖြစ်၊ ဘာဘာရို ရွာကို ပြန်ဖို့ရာ၊ သားချေ ကြီးလာခါ အရာ တစ်ခါလာ၊ ယင်းမှာ မြွီတိ၊ကင်းကြီးတိဟိရေလတ်"။ ယေကေလေ့ မြတ်မင်းဦ နားမထောင်။ ငိုလျက်
်" ဘာဘာ..အဟီး ဟီး .. သားကို လိုက်ပို့ပီးပါ.. သားချေကို လိုက်ပို့ ပီးပါ။ သားချေ အ၀ီးက မြင်ရကေလေ့ ကျေနပ်ပါရေ..ဟီးဟီး သားချေကို လာပြပါ ဘာဘာ..သားချေ တောင်းပန်ပါရေ.."
ယင်းပိုင် ဆို့ပါအောင် မြေမှာလူးငိုသောကြောင့် အဖသယ်လည်း အဖော်တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ခေါ်လျက် မြင်းလှည်းတစ်စီးနှင့် အပြင်းလိုက်ပို့ရသည်။ မြတ်မင်းဦးရို.မြင်းလှည်းသည် ကိုးသျှောင်းပုထိုးတော်ကြီး အနောက်ဘက်တစ်နီရာတွင်ရပ်သည်။
မြတ်မင်ဦးသည် သူဟြိ့က ကန်းချေနားသို့ ဦးတည်လိုက်သည်။ ထိုကန်ဘောင်ထက်မှ သူ ပုထိုးတော်ကြီးကို ကြည့်ချင်ပုံပေါက်သည်။ သူကန်ဘောက်ထက်တက်လိုက်ချိန်တွင် သူအဖက မြတ်မင်းဦး အနားမှ လာရပ်သည်။ မြတ်မင်းဦးသည် ကန်ထဲတွင် ဖူးပွင့်နီသော ကြာနီပန်း၊ကြာဖြူပန်းတိ ကိုကြည့်နီစဉ်တွင် မျက်လုံးမှ မျက်ရည်တိ စီးကျလာပြီး ရပ်စောက် မူးလဲကျလားသည်။ မြတ်မင်းဦး အာရုံတွင် အမှောင်ကမ္ဘာကြီးစိုးလားလီသည်။
နိရက်။......... ။ ၂၀၀၀ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁
အချိန်။........ ။ရခိုင်စံတော်ချိန် နိခြင်းဖက် ၂ နာရီ
နီရာ ။ ..........။ ရခိုင်ပြည်၊ စစ်တွေ
" ဟေး ..ကောင်မ သန်ဦးခိုင်၊ သူငယ်ချင်း ကကောင်းပင်လေ့ မိုင်ရေကာ"
ပွိင့်ကမ်းခြီတွင် အညောင်းလာဖြေကတ်သော သန်းဦးခိုင်ရို.သူငယ်ချင်းတစ်စု တစ်ချိန်လုံးမှိုင်နီသော သန်းဦးခိုင်ကြောင့် ခေါင်းခြောက်လျက်ဟိသည်။
သူမ သူငယ်ချင်းတိက ဆက်လို့ " နင် ဇာဖြစ်နီလေ သန်းဦးခိုင်၊ ငါရို့ နင်ရို.တိစွာ ဘ၀ တူ သူငယ်ချင်းတိရာမလား ။နင်ဇာဖြစ်နီလေ ငါရို.ကို ပြော၊" ယင်းပိုင် တောင်းဆိုလာကတ်သည်။ သန်းဦးခိုင်လဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ချက်လာသည့်အတိုင်း
" ဟုတ်တေဟေ ငါလေ ငါချစ်တေ အဖရခိုင်ပြည်ကြီးနန့် ငါချစ်တေ နင်ရို.တိကို စွန်.လို့ ရန်ကုန် ကို တစ်ပတ်အတွင်း ငါပြောင်းဖို့ယာ...... ငရို.မိသားစု တစ်စုလုံး ဘာဘာ အလုပ်ကိစ္စ နန့် ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖို့လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတ်ဗျာယ်။"
ယင်းသို့ပြောပြီး သန်းဦးခိုင် မထိန်းနိုင်ဘဲ ခေါင်းငုံငိုနီသည်။ ယင်းစကားအဆုံးတွင် သူမ သူငယ်ချင်းတိလည်း တိတ်ဆိတ်လားသည်။ ငယ်ပေါင်းသူငယ်ချင်းတိ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တစ်သက်လုံးလက်တွဲကတ်ဖို့ပြောခကတ်တေစကားတိ အဂု ဂစ္စပနဒီ
မြစ်ထက်က မိုးရိပ်တိ လွင့်လားပိုင်။
" နင့်ရို.ကို ငါသီအောင်ချစ်တေ ဆိုစွာကို ဒေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးကို ငါသက်သေတည်ရေ၊ ငါ ရင်ထဲမှာဟိနီရေ ခင်မင်မူတိကို ငါမဟိရေ နိ တစ်နိမှာ ဒေ ပွိင့်ခရင်းက သဲသောင်းချေတိ နန့် လိူင်လုံးချေတိ နင့်ရို.ကို ပြောပြကတ်လိမ့်မေ၊"
တိတ်ဆိတ်နီသော သန်းဦးခိုင်သူငယ်ချင်းတိ မျက်နှာပြင်တွင် မျက်ရည်မိုးတိရွာကျလာသည်။ သူရို.၏ရင်တွင်း၌ နာမည်ဖော်မပြနိုင်သောအရာတစ်ခု ဆုံးချုံး လားပိုင်ခံစားနီရသည်။ ပွိင့်ခရင်း က လှိုင်းချေတိနှင့် သဲသောင်ပြင်ချေတိက သန်းဦခိုင်ရို.ခံစားချက်တိကို နားမလည်နိုင်ရေ မျက်လုံးတိနှင့် ငေးလျက်.......။ သန်းဦခိုင် ဆက်ပြောသည်။
" နင်ရို.ငါ့ကို စာရွီးကတ်နန်း၊ ငါ အဖပြည်ကို လုံးဝ မခွဲချင်၊ယကေလေ့ ဘ၀ အခြေအနေအရ.. ဟီး ဟီး"သန်းဦးခိုင်ငိုယင်းဆက်ပြောသည်။
" အချိန်တန်ကေ ပင်လယ်လီကို သျှူဖို့ ငါရို.တိပြန်ဆုံတွိကတ်ဖို့"
စစ်တွေလီဆိပ်သည် ခရီသည်နှင့်ပြည်လည်နိုးထလာသည်။ လီဆိပ်ကဗာဒံပင်ချေတိ ပင်လယ်လီညုင်းချေတိနှင့်အတူယိမ်းနွဲကလျက်။ လီဆိပ်အတွင်း မြူနှင်းချေတိတ၀ီဝီ။ တအင့်ချေ အကြာတွင် သန်းဦးခိုင်နှင့် သူငယ်ချင်းတစ်စုလီဆိပ်သို့ရောက်ဟိလာ
ကတ်သည်။ ဒေနိသည် သသက်လုံးတတူလား တတူစား ဆိုးတူကောင်းဘက် ပေါင်းလာသော အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို လက်လွတ် ဆုံးသျုံးခံရမည့်နိဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါသည်။ သန်းဦးခိုင် မကြာခင် ရန်ကုန်မြိူ့ကို အဲယားမန်း နှင့် ထွက်ခွာလားဖို့ဖြစ်သည်။ စစ်တွေလီဆိပ်မှ မြူချေတိ အ၀ီကိုလွင့်လားချိန်တွင် အာကာကနီရောင်ဖြာကျလာသည်။ လီဆိပ်သည်လည်း လူစကားပြောသံတိနှင့်ဆူညံ့လာသည်။ စကားတစ်လုံးမှမပြောနိုင်ကတ်သူများမှာ သန်းဦခိုင်ရို.ဘော်ဒါအုပ်စုဖြစ်သည်။သူရိုဝမ်းနည်းနီကတ်သည်။ လူတိဟြိ့တွင်မငိုမိအောင် မနည်းအားတင်းထားရသည်။ လီယဉ်နောက်ကျနီသည်ကိုပင် သူရို.ကျေးဇူးတင်နီကတ်သည်။ သူရို.ချစ်ရသောသူငယ်ချင်းတိနှင့်နောက်ဆုံးတစ်စက္ကန့်ထိသူရို. အတူဟိနီချင်သည်။
လီယဉ်အသံတတုန်းတုန်းကြားရပြီ။ သန်းဦးခိုင် မျက်ရည်ပေါက်တိ တင်းထားသည့်ကြားကစီးကျလာသည်။ ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ တစ်ငယ်ချင်းတိကိုဖက်လို့ငိုမိသည်။ လီယဉ်ဆိုက်သည်နှင့် အကြာကြီးအလွမ်သယ်လို့မဖြစ် ကောင်တာတွင်တန်းစီရမည်။ ခရီးသယ်သီသန်းခန်း အ၀င်တွင်သန်းဦးခိုင် လက်ကို သူ.သူငယ်ချင်းတိဆွဲထားသည်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးဖက်ငိုကတ်သည်။
" သူငယ်ချင်း၊ ငါရို.ကို မမိလားလီကေ့ နန်း၊ နင် အချိန်ရကေ ငရိုဘက်ကို အလည်လာနန်း၊" " နင်ပြောခရေပိုင် အဖရခိုင်ပြည်ကြီးနန့် ရခိုင်လူမျိုးတိ မမိလီပါကေ့ သူငယ်ချင်း၊ နင် ပြန်လာဖို့နိကို ငါရို.စောင့်နလီဖို့။"
လူအပြည့်ပါသောလီယဉ်ထက်၌ သန်းဦးခိုင်တစ်ယောက် ရင်လုံးဆို့ငိုနီသည်။ သူမ သူငယ်ချင်းမျက်နှာတိ သူမမျုက်လုံးထဲတွင်တဖြိန်းဖြိန်းမြင်ယောင်နီသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲသူမ ငိုနီမိသည်။ လီယဉ်ပျံ ပျံတတ်ချိန်တွင် ပွိင့်သဲသောင်တန်းရို.၀ီးကျန်ခသည်။ ချစ်သောမြီ မြို့စစ်တွေ မှုံဝါးလားသည်။
စိမ်းပြာရောင် ဂစ္စပမြစ်ရီပြင်ကို မျက်ရည်ပေါက်တိနှင့် လီယဉ်ပေါ်က သန်းဦခိုင် လက်ကာပြမိသည်။ စိမ်းညိုမိုင်းပြနီရေ ရခိုင်တောင်တန်းတိ နှင့် အဖရခိုင်ပြည်ကြီးသူမအနားမှဝီးကျန်ရစ်သည်။
လီယဉ်ပျံကြီး နွယ်ချိုဖိုးခေါင်၊ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းတိကို အကျော်တွင် သန်းဦးခိုင်ချစ်ရသော အဖရခိုင်ပြည်ကြီးသူမှနားမှလုံးဝ ပျောက်ကွယ်လားသည်။
နိရက်။........ ။ ရခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၁၄၁-၁၁၄၂ ၊ ပြာသိုလဆန်း (၁၀) ရက်၊ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်: 1780AD ဒီဇင်ဘာလ။
အချိန်။........ ။ (၂) လာ စနီ မိုးထဖက်ချိန်
နီရာ ။ ..........။ ရခိုင်နိုင်ငံ၊ မြောက်ဦးရွီမြို့တော်၊ သျှစ်သောင်းပုထိုး နှင့် ကိုးသောင်း ပုထိုးတော်ကြား ၊
"မောင်ကြီး ..မောင်ကြီး ...ဒေမှာကြည့်စမ်၊ ဒေကြက်မောက်ပန်းချေ ဇာလောက် ချစ်ဖို့ကေင်းလေ၊" ဆိုကာ မင်းသမီးချေ မြကြာညိုက သူမ အကိုကြီးကို ခူးပနာပြသည်။
"အေး အေး.. နှမတော်၊ ပန်းချေတိ အများကြီးခူးထား၊ ပန်းတိအများကြီးရလာကေ နှမချေနန့်မောင်ကြီး.. ဒေ မောက်နှမ နှစ်မ နှုစ်ယောက် ဒေ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးမှာ လှူကတ်ဖို့ ၊ ယပြီးကေ နှမချေ ချစ်ရရေ မောင်ကြီးနန်. မောင်ကြီးချစ်ရရေ နှမချေ.. ဒေမောင်နှမနှစ်ယောက် ဘ၀ ဘ၀ ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာ ဆုံတွိကတ်ဖို့ ဆုတောင်းကတ်ဖိုးနန်း နှမတော်" မင်းသားချေ မင်းစော စကားအဆုံးတွင် မြကြာညိုမျက်နှာပါ အပြုံးပန်းချေတိ သန်းလာသည်။
"အော်..မောင်ကြီး မောင်ကြီး..အဂုတော့ခါ ငါ့နှမ၊ငါ့နှမနန့် ၊မြကြာညို ကကောင်းမပြောချင်..၊ ထိုတစ်ရက်နိက နန်းတွင်းအနောက်ဆောင်က အမတ်ကြီးထွန်းအောင်ကျော်သမီးတော် မြစောညိုတွက် စောင်းတော်တီးလို့ ဂီတသံစဉ်တိ လားဆက်သက်တေ လို့ နှမချေ ပြောသံကြားရေ.......။ ကြင်ဖော်ရကေ မောင်ကြီးက ချစ်ရရေ ဒေနှမချေကို မိလီဖို့စွာယာ....ဟိဟိ.." ဟုမောင်သယ်ကို သွန်းလိုက်သည်။ မင်းသားမင်းစောသည် ဟြက်(ရှက်) စိတ်ဝင်လားပြီး ....
" ဟေး ....ဒေသူတစ်ယောက် အထူးထူး မပြောရ မောင်ကြီးကို ငရဲကြီးဖို့ယေ" ဟုဆိုကာ စကား ပိတ်လိုက်သည်။
မင်းသားမင်းစောနှင့်မင်းသမီး မြကြာညိုရို.သည် မြောက်ဦးမြို့တော်ကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်ယူထားသော အမတ်ကြီးသာထွန်းအောင်၏ သမီးတော်၊သားတော်များဖြစ်သည်။ မင်းသားမင်စောသည် အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၂၄နှစ်ခန့်ဖြစ်ပြီး ၊သူနှမချေမြကြာညိုမှာအသက် ၂၀အရွယ်ဖြစ်သည်။ မင်းသားမင်းစောသည် မြောက်ဦးဘုရင်သမ္မတရာဇာမင်း၏ ကိုယ်ရံတော်တပ်၌ တပ်မူးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ မင်းစောသည် တိုက်ရီး၊ခိုက်ရီးကျွမ်းကျင်ပြီး၊မြင်းများကိုအလွန်ပင်ချစ်တတ်သည်။ သူသည် အသက် ၂၀ခန့် အရွယ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စစ်ရေးပညာသင်ရန်စေလွတ်ခံရဖူးသည်။ စာပီ၊ဂီတ အနှပညာကိုလည်းအလွန်ပင် ခုံမင်သည်။ အချိန်ရလျှင် ရတု၊ကဗျာ များအပျော်တမ်းစပ်လေ့ဟိသည်။
မင်းသမီးချေ မြကြာညိုမှာ နန်းတွင်း အထူးဆောင်၌ ရခိုင်စာပီ ဂီတ အနှပညာများ သင်ကြားနီဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်ဘ၀ကို ရတုကဗျာတိစပ်ယင်းနှင့်ပင်ကုန်ဆုံးစီချင်သည်။ သူရိုမောင်နှမနှစ်ယောက်သည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်လွန်စွာချစ်ကတ်ပြီး ၊ ၀ါသနာတူ၊ အကျင့်တူများးဖြစ်သည်။ ဘာသာတရားကိုလည်း အလွန်ပင်ကိုင်းချိုင်းကတ်ပြီး ဘုရားမြတ်စွာအား သက်ဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ပါသည်။ အဂုလည်း အခြွေအရံတိနှင့် ပန်းများခူးကာ ဘုရားမှာလှူရန်ကိုသောင်းဘုရား အနောက်ဘက်တစ်နီရာကိုရောက်ဟိလာကတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူရို.သည် အခြွေအရံတိကို အ၀ီးမှ စောင့်ကတ်ရန် မှာလိုက်ပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက် လလွတ်လလပ်ပန်းများခူးကာ ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးတွင်ကပ်လှူပှုဇော်ကတ်မည်ဖြစ်သည်။
" နှမတော် ...ဒေမှာ တစ်နားချေနီလိုက်..ပန်းတိခူးထား၊ မောင်ကြီး ထိုဟြိ့က ကန်ကြီးကိုလားကြည့်ချင်ရေ၊ ယင်းကန်ထဲက ကြာဖြူ၊ ကြာနီ ချေတိကို မောင်ကြီး ကြည့်ချင်လို့" ဟု မင်းစောလှမ်းပြောလိုက်သည်။
" နှမချေလေ့ လိုက်ပါရဇီ မောင်ကြီး၊ ဒေနားမှာ တစ်ယောက်တည်း မနီဝံ့၊ နှမချေ ကြောက်တေ" ဟုမြကြာညိုပြန်ပြောသည်။
"ဇာကို ကြောက်စရာလိုလေ နှမတော်၊ ထော.. ဒေက အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက် ငါရို. အဘိုးတိတည်ထားခရေ သျှစ်သောင်း၊ထုက္ကသိမ်၊ လေးမျက်နှာဘုရားပုထိုးတိ ဟိန်းလို့၊ ထော.. အဟြိ့(ရှိ) ဘက်ကိုကြည့်လိုက်စမ်......။ ဘုရင် မင်းခမောင်တည်ခရေ ကိုးတော်ပုထိုတော်ကြီး တိ မမားမမတ်နန့်၊ အခြွေအရံတိလည်း မပါးမ၀ီးမှာ ဟိကတ်တေ မလား" ပြောသာပြောလိုက်ရသည် သူညီမ နားထောင်ဖို့လို့ မင်းစောမထင်။
" အာ.. မောင်ကြီး၊ မရ နှမတော်ကြောက်တေ" ဟုဆိုကာ ပန်းရိုင်း ခြုံပုတ်တိ ကြားထဲက ပြီးထွက်လာသည်။ မင်းစောလေ့ တားဖို့အချိန်တောင်မရလိုက်။ " အေး ၊"အေး" နှင့် သဘောတူလိုက်ရသည်။
"နှမတော် ကန်ထဲမှာ ပေါက်နီကတ်တေ၊ ကြာဖြူ ကြာနီပန်းချေတိကိုကြည့်စမ်၊ ဇာလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလေ၊ နှမတော် မောင်တော်တစ်ခု ပြောပြမေ၊ ကြာပန်းဆိုစွာ လောကကို သူ့အလှတစ်ခုတည်းနန့် အလှဆင်စွာမဟုတ်၊ ဘ၀ ကိုလုံးဝ အရှုံးမပီးရေ ပန်းတိထဲမှာ ကြာပန်းရေ သတ္တိအဟိဆုံးဖြစ်တေ နှမတော်" မြကြာညို သူ့မောင်သယ်စကားကို နားမလည် ဖြစ်နီသည်။
" နှမတော်.. ကြာပန်း အလှတစ်ခုတည်းကို မကြည့်ကေ့ ၊ ကြာပန်း အောက်မှာ ရီဟိရေ၊ ယင်းရီအောက်မှာ ကျူပ်တိ ဘိတ်နန့် ပေါင်းစပ်ထားရေ ဒေကမ္ဘာမြေကြီး ၊ ယင်းပိုင် အခက်အခဲ့တိကြားထဲတိ အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးကေ လောကအလှဆင်ဖို့အတွက် ရုန်းထွက်ပါလတ်တေ ဒေပန်းချေတိကို ဘလောက်ချီးကျူးဖို့ကောင်းလေ ကြည့်စမ်"။ မင်းစောတစ်ယောက် အသျှေတစ်ယောက်ပိုင် နားထောင်နီသော သူ့နှမချေကို ဥပမာတိ နှင့် ချင်းပြနီသည်။
"မောင်ကြီးလည်း ကို့နှမချေကို ဒေကြာပန်းချေတိပိုင် အဖရခိုင်ပြည်ကြီးကို အလှဆင်ဖို့ မောင်ကြီး တိုက်တွန်းချင်ရေ နှမတော်"
မြကြာညိုကလည်း မောင်သယ်ကို သူမ တတ်စွမ်းသော စာပီ၊ဂီတ အနှပညာနှင့် အဖရခိုင်ပြည်ကြီးကိုအလှဆင်မည်ဖြစ်ကြောင့်ကတိပီး
လိုက်သည်။ မင်စော စကားပြန်စလာသည်။ သူသည် သူ့နှမချေအား သူကြိုက်တေ သုဝဏ္ဏဒေ၀ီ (စောပြည့်ညို) ရွီးစပ်ခသော သိန်ကန်မိန်တွင်ရတု ကို ကြားချင်ကြောင်းပြောပြသည်။ မြကြာညိုလည် သူမမှတ်မိသလောက်မှ
"လျှောက်တင်ခါပန်း၊ ရာသီဆန်းလျင်၊ နန်းမြင့်အောင်မြီ၊ ဆယ့်နှစ်လီရစ်သန်းမြူး၊ မောက်သူဇာကေ၊ ဒက္ကာဆိပ်ကမ်းဦးက၊
ကျေးဇူးဂုဏ်သျှစ်တန်၊ အမတ်လိမ္မာ၊ ထိုမြို့ရွာတွင်၊ အာဏာသုံးခယ့်ပြန်မှ၊ ပြောင်ဆဒ္ဒန်မာတင်ရိုး၊ ထွက်လျှင်မပြန်၊
မလှန်ကိုယ့်မင်းမျိုးတည့်။ ဆိုးကောင်းနှစ်ပါးတွင်၊ ရိပ်ခြည်အမျှင်၊ အသျှင်သိလျှင်းပင်တည့်။ ပညာသျှင်အုပ်ထိန်းမှ၊ မြို့ပြပြည်ရွာ၊
သာယာစည်ကားလှအယ့်။ မင်းယောက်ျားဓမ္မတာ၊ ပညာမဲ့ကွက်၊ ညာဏ်မစွက်သော်၊ ပြည်ထက်မထားရာတည့်။
ရှိယ့်ကျမ်းလာထုံးစာဟောင်း၊ ကျိုးကြောင်းသိပြန်၊ ဘွဲ့မွန်အမတ်ကောင်းကို၊ နောက်တကြောင်းကုလားရွာ၊ အပိုင်အပ်ပြီး၊ စစ်သူကြီးဟု၊ ................"
မင်းစောလည်းလွန်စွာအားရကျေနပ်လျက် နှမချေအား ချီးကျူးစကားဆိုသည်။ ယင်းနောက် မင်းသားမင်းစောနှင့်မင်သမီးချေရို.သည် ကိုးတော်ပုထိုးတော်ကြီးသို့ ပန်းစည်းတိကိုင်ပနာ လျောက်လာကတ်သည်။ ထိုနောက် ပန်းတိကို ဘုရားတွင်ကပ်လှူပှုဇော်လျက် မောင်နှမနှုစ်ယောက် ဘ၀ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဆုံတွိရပါလို.၏ဟုဆုတောင်းကတ်သည်။
"အသျှင်ဘုရား ...တပည့်တော်၊တပည့်တော်မရို. မောင်နှမနှုစ်ယောက် ဘ၀ဘ၀ ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမှာ ဆုံတွိရပါဇီ ဘုရား ....."
မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆုတောင်းသံတိ ကိုးတော်ပုထိုးတော်ကြီးလှိုင်ဂူတိထဲတွင် ပဲ့အထပ်ထပ်တင်လျက်..........။
နိရက်။........ ။ ရခိုင်သက္ကရာဇ် ၁၁၄၄-၁၁၄၅ ၊ တန်းဆောင်မုန်း လဆန်း(၅) ရက်၊ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ်: 1783AD အောက်တိုဘာ။
အချိန်။........ ။ (၂) လာ အင်္ဂါနခြင်းဖက်ချိန်
နီရာ ။..........။ မြောက်ဦး ရွီနန်းတော်
နန်းတွင်းညီလာခံကျင်းပနီသည်။ ရခိုင်နိုင်ငံရေး အတိမ်းအစောင့်မခံနိုင်သော အနီအထားဟိသည်။ သမ္မတရာဇာဘုရင်အား အရည်အချင်းမဟိဟုဆိုကာ ခွဲထွက်အဖွဲများပေါ်လာပြီး ဘုရင်၏ထီးနန်းကို ပုန်ကန်ခြားနားမူတိ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ရခိုင်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊လူမူရေး၊နိုင်ငံရေး အဘက်ဘက်မှရီဝင်လာသည်။ ရခိုင့်ပြည့်သျှင်ဘုရင်မင်းမြတ်သည့် ပြည်တွင်းပုန်ကန်ခြားနားမူ၊ ပြည်တွင်း မိုးခေါ်မှု၊ အစာ၊ရီစာ သျှားပါးမူ၊ ၀မ်းရောဂါ ဖြစ်မူစသည့် ပြဿနာ ပေါင်းစုံနှင့်ကျင်ကိုင်နီရသည်။ စိုင်းတင်မြို့စား ငသံဒွေသည် ဘုရင်အား ဗြောင်စိန်ခေါ်မူများပြုလုပ်လာပြီး ရခိုင်ထီးနန်းကို ခြိမ်းခြောက်သည်။
နန်းတွင်း ညီလာခံ၌ ဌာန ပေါင်းစုံမှ မြို့စား၊ ၀န်ကြီး၊ မူမတ်အပေါင်းစုံရို.သည် ရင်မအီးနိုင်သော ရခိုင့်အနာဂတ်တွက် ဘုရင်ကြီးနှင့် အကြိတ်အနှယ် ဆွဲနွဲလျက်ဟိသည်။ မူးကြီး၊မတ်ကြီးရို.သည် ရာထူးအဆင့်၊အတန်းလိုက် ငွေ ကုတင်(ကုလားထိုင်) ထက်များ
တွင် သမာဓိအပြည့်နှင့်ထိုင်နီကတ်သည်။တချို.သော နန်းတွင်းသူ၊နန်းတွင်သားများသာ ဘုရင်ကြီးကို ထိုင်လျက်ခစားနီကတ်သည်။
" အေး ... အဂု ပိုင် အကြံဥာဏ်တော်တိနန့်၊ အားတိုက် အင်တိုင် ဆွေးနွေးပီးကတ်တေ ၊ မူးကြီး၊ မတ်ကြီး၊ ၀န်ကြီး၊ အမတ်ပညာဟိ ရို.ကို ငါ ကိုယ်တော်မြတ် ကျေးဇုတင်ဟိတော်မူရေ၊ စိုင်းတင်မြိူ့စား ငသံတွေ ခြီလှမ်းတိကို သတိထား စောင့်ကြည့်ပြီးကေ
၊ ရင်ဆိုင်နီရရေ အခက်အခဲ့ တိကို ပူပေါင်း ဖြေသျှင်းကတ်ရဖို့ ၊ အမတ်ကြီးအပေါင်ရို." နန်းတွင်ညီလာခံ ပလ္လင်ထက်က ဘုရားကြီးအသံ ဟိန်းထွက်လာသည်။
" အမတ်ကြီးသာထွန်းအောင်၊ စကားမစပ် မြောက်ဦး ရွီမြို့တော် လုံခြုံရေးကိစ္စ ငါကိုယ်တော့်မြတ် သိချင်ရေ၊" အမတ်ကြီး သာထွန်းအောင်အား ဘုရင်ကြီး မီးတော်မူသည်။
" မှန်လှပါ အသျှင်မင်ကြီး၊ မြောက်ဦးမြို့တော် လုံခြူံရေးကိုပါ ငသံဒွေ နန့်
အဖွဲ ဗြောင် စိန်ခေါ်နီကြောင့်ပါ၊ ယေဘင်ယေကေလေ့ အကျွန်မျိုး အသျှင့်သစ္စာတော် စောင့်သိတော်မူလျက် အခြေအနီပုံမှန်ရောက်အောင် ကြိုးစား နီပါရေ အသျှင် မင်းကြီး၊" ။
ဘုရင်ကြီး မျက်နှာမသာမယာဟိသည်။ ဘုရင်ကြီးသည်တိုင်းသူ၊ပြည်သားတိတွက် စိတ်မသာမယာ ဖြစ်နီဟန်ဟိသည်။
" အေး.. အေး .. အစစ အရာရာ သတိတော်ထား ၊ဆင်ခြင်တော်မူလျက် သူတော်ကောင်းထုံး နှလုံးမူပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကတ်ပါ အမတ်ကြီး ။ ငါ ကိုယ်တော်မြတ်၊ ဒေနိဖို့ ညီလာခံ ရပ်တော်မူမည်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်ကတ်စီ၊
အမတ်ကြီးအပေါင်း ရို." " မှန်လှပါ အသျှင်မင်ကြီး၊ အသျှင်မင်းကြီး သက်တော် ရာကျော် ဟြည်ပါဇီ။" နန်တွင်းသူ၊ နန်းတွင်းသား အပေါင်းရို၏ ဆုတောင်းသံ နန်းတော်တစ်လုံး ဟိန်းလားသည်။
ဘုရင်မင်းမြတ်လည်း များစွာသော အခြွေအရံတိနှင့်မိမိ ရွှေနန်းဆောင်းသို့ ကြွမြန်းတော်မူသည်။
1784AD (တစ်နှစ်တိတိ ကြာပြီးနောက်)
" ဒုန်း၊ ဒုန်း၊ ဒုန်း၊ အသျှင်မင်းသား၊ အသျှင်းမင်းသား အယင်ထတော်မူပါ၊အယင်ထတော်မူပါ၊ အောက်ပြည်က ဗမာတပ်တိ မြောက်ဦး မြို့တော်ကို ၀င်သိမ်းနီပါကြေင့်ပါ။"
ကိုယ်ရံတော် တံခါးခေါက်နိုးမူကြောင့် မင်းသားမင်းစောသည်ဗြန်းဆိုလန့်နိုးချိန်တွင် မြောက်ဦးမြို့တော်မှ အလွန်တရာမှ ကြောက်မွက် ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသော အသံများဆက်တိုင်ကြားလိုက်ရသည်။ လူကျွီးသံ၊ အချေတိငိုသံ၊ မြင်းကျွီးသံတိ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ နန်းတော်အချက်ပီးနန်းဆောင်တော်မှလည်း အချက်ပီးရခိုင်စည်သံမိုးကြိုးပစ်ပိုင်ပေါ်ထွက်လာသည်။
မင်းစောသည် သူ၏ လက်စွဲတော်ဓားကို ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်လိုက်ပြီး ၊
" တောက်... ရာဇ၀င် ရိုင်းလိုက်လေ ဝေ.. တိုင်းပြည် တစ်ပြည်ကို စစ်မကြေငြာဘဲ မဆမပိုင် အငိုက်ကျုးကျော်ဝင်သိမ်းရရေလို့၊ ကဲ...အချိန်မဟိ၊ တပ်မူး ဘုရင့်လူခြုံရေး အရေးကြီးရေအဂုချက်ချင်းလာကတ်မေ".......။
ထိုအချိန်တွင် မင်စောနှမတော် မြကြာညိုသည် အခြွေအရံတိနှင့် ရောက်ဟိလာသည်။
" မောင်ကြီး၊ မောင်ကြီး .... မြောက်ဦ ရွီးမြို့တော်ကို ဗမာတပ်တိ ၀င်သိမ်းထားပါယာ... အဂု နန်းတော်ကို ချီတက်လာနီကတ်တေ"
မြကြာညို ဆို့နစ်ငိုကြွေးလျက် ယှောက်တင်သည်။
"အေး နှမတော်.. ဘုရင်မင်းမြတ်လုံခြုံ အရေးကြီးရေ၊ မောင်ကြီး အဂုချက်ချင်းလားလိုက်မေ၊ နှမတော်လေ့ အစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပါ၊" မင်းစောသည် မျက်ရည်မကျမိအောင်း အားတင်းထားရသည်။ တာဝန်အရသာ လားရသည်။ သူချစ်နှမတော်နှင့် ဒေပိုင်
အန္တရာယ်တိနှင့်ကြုံတွိနီချိန်တွင် မင်းစော အတူဟိနီချင်သည်။
" မောင်ကြီး , မောင်ကြီး အစစ အရာရာ သတိထားဆောင်ရွက်တော်မူပါ၊ နှမတော် ဇာပင်ရောက်ရောက် မောင်ကြီးကို စောင့်နလီဖို့" ဆိုးနစ်ငိုကြွီးသံနှင့် အတူထွက်ပေါ်လာသော နှမတော် စကားသံ မင်းစောနား ပဲတင်ထပ်လားသည်။
မင်းစောသည် ဗမာကျူးကျော်တပ်ကို အသက်နှင့်လဲ ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သူ၏မျက်နှာတွင် ရဲစိတ်ရဲမာန်တိတတ်ကြွလျက်ဟိသည်။ သူသည် သူ၏ မြင်နီကြီးကို စီးလျက် တပ်သား ၂၀၀ ခန့်ဟိသော ဘုရင်ကိုယ်ရံတော်တပ်ကို အဖပြည်တွက် အသက်ကိုစွန့်လွတ်ရန် အသံကျယ်ကြီးနှင့် အမိန့်ပီဆော်သြနီသည်။
ယင်းအချိန်တွင် သွီးရဲရဲနှင့် စစ်သားတစ်ယောက် မြင်းနီကြီးနှင့် အပြီးရောက်ဟိလာသည်။
" အသျှင်မင်းသာ၊ မြောက်ဦး ရွီးမြို့တော်ကြီး မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နီကြောင့်ပါ၊ ရခိုင်သူ၊ရခိုင်သားတိမှာလဲ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြီးနီကတ်ကြောင့်ပါ အသျှင်မင်းသား၊ အကျွန်မျိုးအား ခွင့်လွတ်တော်မူပါ"။ ယင်းသို့ ပြောကြားပြိးနောက် ထိုစစ်သားသည် မိမိ လည်ပင်းကို လျင်မြန်စွာ လှီးဖြတ်လိုက်သည်။
အသက်မဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကြီး မင်စော ဟြိ့အရိုးပြတ်လဲကျလားသည်။ မင်းစောသည် ထိုစစ်သားကို မြင်းထက်ကခုန်ဆင်း ဂါရသ၀ ပြုလိုက်သည်။ ယင်းနောက် မြင်းနီကြီးထက် ခုန်တက်လိုက်ပြီးနောက်
"ရခိုင်နွယ်ဖွား အမျိုးစစ်တေ ရဲမက်အပေါင်းရို. သင့်ရို.သွီးဇာလောက်ရဲလေဆိုစွာကို အဖပြည်တွက် ဒေနိ ဒေအချိန် ပြဖို့ အချိန်ရောက်ဗျယ်..။ငါ့ရို. ရခိုင်ပြည်၊ရွီနန်းတော်ကို ငါရို. အသက်နန့်လဲ ကာကွယ်မည်" မင်းစော ရာဇမာန်အပြည့်နှင့် ကြုံးဝါးလိုက်ချိန်တွင် ရဲမက် အပေါင်ရို. ပြိုင်တူလိုက်ဆိုကတ်သည်
" ငါ့ရို. ရခိုင်ပြည်၊ ငါရို.ရွီနန်းတော်ကို ငါရို. အသက်နန့်လဲ ကာကွယ်မည်"
ကြုံးဝါးသံတိ နန်းတော်တစ်ခုလုံး ဆူညံလားသည်။ မင်းစောသည် တပ်မူးတစ်ချို.နှင့် ဟြိ့က ချီတက်လျက် နန်းတော် အပြင်ဘက်တံတိုင်းအရောက်တွင် မြောက်ဦးတစ်ခုလုံး မီးဟုန်းဟုတ်းတောက်နီသည်။ ရဲမက်အချိုမျက်လုံးမှ မျက်ရည်တိ ယိုစီးကျလာသည်။
၀မ်းနည်းအချိန်မဟိပါ။ နန်းတော်နှင့် အသျှင်အား အသက်နှင့်လဲ ကာကွယ်ရမည့်ဖြစ်သည်။ မင်းစောရို. အဟြိ့ တဂါဝုဒ်ခန့် အကွာမှ ဗမာစစ်သည်များသည် နန်းတော်သို့ချီတက်လာနီသည်။ အချိန်ကား သန်းခေါင်အချိန်။ ကွမ်းတယာအညုက်ခန့်အကြာတွင် ဗမာကျူးကျော်တပ်နှင့် ရခိုင်မင်းစောတပ်ရို. ရင်ဆိုင်တိုးသည်။ တိုက်ပွဲသည် အလွန်ပင်ပြင်းထန်လှသည်။ လူကျီးသံများ၊ မြင်းကျီးသံနှင့် ကမ္ဘာပြိုလားဟန်ဟိသည်။
မင်းစောရိုတပ်ဖွဲ့သည် ဗမာတိကိုအားမန်အပြည့်နှင့်ရင်ဆိုင်ခုခံသည်။ ရဲမက် ၂၀၀ ခန့်ဟိသော မင်းစောရို့တပ်သည် အလူးအလဲခံနီရသည်။ မင်းစောစစ်သည်များသည် အတုံးအရုံးကျဆုံးကတ်သည်။
အင်အားချင်းမမျှ၍ တစ်နာရီခန့်အကြာတွင် နန်းတွင်းအ၀င် တံခါးမကြီးလုံးဝပွင့်လားသည်။ ဗမာစစ်သည်များသည် ရွီးနန်းတော်ကြီးထဲသို့ ဒုံးစိုင်းဝင်လားချိန်တွင် နန်းတွင်းမှ ကျွကျွတ်ရိုက်သံများဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ မင်းစောသည် မျက်ရည်ကိုသုတ် ဓားနှင့်ခွတ်ရင်း ရန်သူအငုတ်ကို သျှင်းနီချိန်တွင် သူ့စစ်သည်များ အတုံးအရုံး သူဟြိ့တွင်ကျဆုံးလားသည်။
မင်းစော၏စိတ်အာရုံတွင် သူ့နှမတော် မျက်နှာ မြင်ယောင်လာသည်။ ကယ်သူမဲ့နန်းတွင်းသူ၊နန်းတွင်သားများ၏ ကျွီးသံ၊ငိုသံတိ မင်းစောကြားနီရသည်။ ယင်းနောက် ရွီနန်းတော်မှမီးခိုးလုံးကြီးတိထွက်ပေါ်လာသည်။မင်းစောသည် နန်းတွင်းထဲကိုဝင်၍ နှမတော်ကို ကယ်ထုတ်ချင်သည်။ ယေပိုင်ယေကေလေ့ ထိုအကြံသည်အလွန်ပင်နောက်ကျနီကြောင့် မင်းစော သဘောပေါ်သည်။ များပြားလှစွာသော ဗမာစစ်သည်များသည် နန်းတော်တံတိုင်း တန်းခါး ပေါက်ကြီးကိုအသီပိတ်ဆိုးလိုက်ကတ်သည်။
"အား ............ " ယင်းသို့ တွေးတောနီစဉ်တွင် မမျော်လင့် လှံတစ်ချောင်း မင်းစော၏ လက်မောင်းတော်အောက်သို့စိုက်ဝင်လာသည်။ မင်းစောသည် နာကြင်လွန်းသောဝေဒနာ ခံစားလိုက်ရပြီး၊ သူဂေါင်းရိုင်လားသည်။ သတိတစ်ချက်ပြန်သွင်းလျက် မြင်းထက်က လူးမကျအောင် မင်းစောထိန်းလိုက်သည်။
ယင်းနောက် ထိုဗမာစစ်သည်အား မိမိ လက်စွဲတော်ဓားဟြည်ဖြင့် မင်းစော လျင်မြန်စွာခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်သည်။
လှံချက်ပြင်းထန်သောကြောင့် မင်းစော ဒယိန်းဒယိုင်ဖြစ်လာသည်။ သွီးစက်များ လက်မောင်းအောက်က ဒလဟော စီးချင်းလာသည်။ သူ့ရဲမက်အားလုံးနီပါးသည်သူဟြိ့တွင် အပုံပုံလဲသီလျက်.....။
" ငါ ......ဗမာလက်မှာ အသီမခံနိုင်"
မင်းစောစိတ်တင်းလိုက်သည်။ ယင်းနောက် ထိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှ မင်စော အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလိုက်သည်။မင်းသားမင်းစောသည် ကြွီကွဲ မျက်ရည်ယိုစီးလျက် မြင်းနီကြီးနှင့် နန်းတော် အဟြိ့ဘက်သို့ ဒုန်းစိုင်းပြီးလာသည်။
လမ်းတစ်လျောက်လုံးတွင် အနိဌာရုံတိ ဆီးကြိုသည်။ မီးလောင်နီသော ဘုရားပုထိုးများ၊ သွီးအိုင်များလဲကျသီဆုံနီသော လူတိအလောင်းများ၊ ကယ်သူမိ ပြီးလွားနီကတ်သော အဖပြည်သူများ၊ အချေ ငိုကျွီးသံများ .....။
သူ့နှမတော်နှင့် ပန်းအတူခူးခသော တောပုတ်နားတွင် မင်းစော မြင်းနီကြီးကိုတန်လျက် ပန်းတဆုပ်ခူးလိုက်သည်။ ယင်းနောက် ကိုးသောင်းပုထိုးတော်ကြီးထဲသို့မင်းစော ဒုန်းစိုင်းဝင်လိုက်သည်။
"အသျှင်ဘုရား ဘ၀ ဘ၀ ဆိုက်တိုက် ဆက်တိုက်မှာ တပည့်တော် နှမတော်နန့် တပည့်တော် ဆုံတွိရပါလို၏။"
မင်းစောမျက်နှာမှမျက်ရည်တိမိုးရွာရေပိုင် စီးကျလာသည်။ ယင်းနောက် မင်းစောသည် သွီးတိနှင့် စည်းနီသောသူ၏လက်စွဲတော်ဓားကို
အထက်သို့မြောက်လိုက်ပြီး မိမိ ရင်ဘက်ထဲကို ထိုးစိုက်လိုက်သည်။ နှလုံးထဲမှ သွီးတိ ဒလယောစီးချင်းလာပြီး မင်းစောအာရုံတွင် အမှောင်ထုသည်ဖုံးလွှမ်းလားသည်။ ၀ိညဉ်လွင့်လားသော မင်းစော၏အသက်မိကိုယ်ခန္ဒာကြီး ကိုးတော်ပုထိုးတော်ကြီးထဲတွင် အထီးကျန်လျက်....။
မင်းသမီးချေ မြကြာညိုသည်အလွန်ပင်ပိန်ခန်းလားသည်။ သူမသည်အဖပြည်နှင့်သူ့မောင်ကြီးကို
လွမ်းရသောစိတ်တိနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက် လျက်ဟိသည်။ မောင်ကြီးမင်းစောတစ်ယောက် သီလို့ဟိလီလာ၊ဟြင်လို့ဟိလီလာ မြကြာညိူသတင်းအစအနပင်မရပါ။ ရခိုင်ပြည်စစ်သျှုံး၍ရခိုင်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မအပါအ၀င် နန်းတွင်သူ နန်းတော်သားတိကို အင်းဝသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆေင်ခခါက မင်းသမီးချေ မြကြာညိုပါ ပါလာသည်။
သူမသည် ဗမာထမင်းကိုမသီအောင်စားလျက် အဖရခိုင်ပြည်နှင့်မြောက်ဦးရွီမြို့တော်အကြောင်းကို ကဗျာစာတိ ရွီးလျက် အချိန်တိကိုကျော်ဖြတ်လျက်ဟိသည်။ စကားမတူ၊ စရိုက်မတူ၊အသွင်မတူသောလူရပ် လူပြည်၌အသက်ဟြန်သန်နီရခြင်းကို မြကြာညို စိတ်ပျက်လျက်ဟိသည်။
တစ်လခန့်အကြာမှာပင် သတင်းအစအနပျောက်နီသောသူမမောင်ကြီးတွက် ငိုရသည့်ရက်တိ မရွီနိုင်တော့ပါ။မင်းသမီးချေ မျက်လုံးတွင်မျက်ရည်များပင်ခန့်ခြောက်လီသည်။ သူမမောင်ကြီးတွက် မျော်လင့်ချက်တိ ကုန်ခန်းလာသည်။
"အသျှင်မဘုရား၊အသျှင်မဘုရား၊" သူမအဆောင်အခန်းတော်မှ အပြင်ကိုငေးနီစဉ်တွင် အခြွေရံမချေတစ်ယောက်ငိုယိုပြီးဝင်လာသည်။
"ဟေ... အညို,..........နင် ဇာဖြစ်လေ ငါ့ကို အဂု လျှောက်တင်စမ်" မြကြာညို စိုးရိမ်စိတ်နှင့်မီးလိုက်လေသည်။ " အသျှင်မဘုရား ........အကျွန်မျိုးရို. အသျှင် မုနိသျှင်တော်မြတ်ကို ဗမာပြည်ကို ယူဆောင်လာဖို့ ၊ ဘုရင်က အမိန့်တော်ချလိုက် ပါယာဘုရား......."
မြကြာညို နဖူးကသွီး ခြီမတက်လျက် မျက်ရည်မိုးတိရွာကျလာသည်။ ရင်ထဲမှလည် အလွန်မှနာကြင်သောဝေဒနာတစ်ရပ်ခံစားလိုက်ရသည်။
"တောက်.........., ရိုင်းလိုက်လေ.. အညို.......လူကြားလို့မကောင်း....... ငရို.ပြည်ကိုမတရားသိမ်း......ငရိုလူမျိူးတိကိုသတ်..အဂုငါရို.အသျှင်ကို မတရားယူပြန်ယာ မလားဂု........" မြကြာညိုတတ်သီးခေါက်သံ အခြွေအရံတိ ဆို့နစ်ငိုသံတိနှင့် ရောထွီးလားသည်။......................
မြကြာညို အဆောင်ဟြိ့တွင် နန်းတွင်းတိနန်းတွင်းသားတိ ကျကျိတ်တိုးနီသည်။ "ရခိုင်..မင်းသမီးလေး....မြကြာညို.....သနားပါတယ်" စသည့်အသံတိ ထွက်ပေါ်လာသည်။ " အသျှင်မ....အသျှင်မ...ဟီး..ဟီးး..အကျွန်မျိုးမ ရို.ကို ထားခယာလာ....ထကြည့်ပါ..အဖပြည်ကို တနိပြန်ဖို့ဆို....ဟီး..ဟီးး..." စသည့် ဆို့နစ်ငိုကြွီးသံတိကြားထဲတွင် မင်းသမီးချေ မြကြာညို ၀ိညဉ်ကင်းမဲ့လျက်.......။
နိရက်။.......... ။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၃၀ ရက်
အချိန်။.........။ ရခိုင်စံတော်ချိန် မိုးထဖက် (၁၀) နာရီ
နီရာ။.......... ။ တောင်ရင်းကျွန်း၊ လည်ရိုးတော်ဓာတ်၊ ပေါက်တောမြို့၊ ရခိုင်ပြည်
ဓာတ်တောင်အောက်တွင် ညင်ညင်သာသာ တိုက်ခိုက်နီသောလီဗီချေသည် အင်ဂရားပန်းအနံ့ချေတ်ိကို မြတ်မင်းဦး နှခေါင်းသို့ယူဆောင်လာသည်။
Posted by KingMarayu at 21:400comments
Labels: ရခိုင် ၀တ္ထူ
ပျောက်လခရေ အပ် ကို
စမ်းဖီ စမ်းဖက် နန့် .............။
သတိမမူ ဂူမမြင် လတ်
ငါ.. ... ..
ကြားဖူး ယင့် ..........
ယာ.. ဒေချင့် ...
ဆလိုက်မီး ထိုးပြလိုက်တေ ....။
ယင်းဂူ ကို လားပနာ
အလိဇီ ခြီနှုန့် သတ်ကတ် ယာ ....။
တိုက် ဖို့သိမ့် ........................။
အပါးဆုံး နီရာ ကို
ကြာလားဖို့ ဟန် .................။
Posted by KingMarayu at 14:540comments
Posted by KingMarayu at 16:250comments
ဒယော နနွမ်း၊အင်္ကျီနနွမ်းနှင့် လူတစ်ယောက်မီးကျောင်းတက် ရွာသို. ချဉ်းကပ်လာသည်။ ထိူလူ၏ မျက်နှာမှာ သန်.ရှင့်ကြည်လင်လျက်ဟိပြီး အပြုံးပန်းတိ ဝေဆာနိန်သည်။ ထိုလူသည် လမ်း၌တွိသောလူများကို ဖဖော်ရရွယ်နှုတ်ဆက်ပြီး သတင်းမီးမြန်း
သောကြောင်း ဆုံတွိရေလူတိက ကကောင်းသဘော မနှော ဖြူစင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပီးကတ်လေသည်။ ထိုလူ၏ နံမည်မှာ စိန်ကျော်လှဖြစ်ပြီး၊ မီးကျောင်းတက်ရွာသို. လာခြင်းအကြောင်းရင်းကို ယင်းသူကလွဲပြီးကေ တစ်ယောက်လဲ သိနိုင်ဖို.မဟုတ်ပါ။ ယကေလေ့
စိန်ကျော်လှ အမူအရာကို သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် သူသည် ခရီးဝီးက လာသူ သူစိမ်းတစ်ယာက်ဟုတ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ စိန်ကျော်လှသည် ရွာငယ်၊လူရွယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ လူသူခရီးမလားသော
မိုးရာသီတွင်မိကျောင်းတက်ရွာလူကြီးအိမ်သို.ဦးတည်လာနိန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာလူကြီးအိမ်သို.အရောက် ရွာလူကြီးက " ဇာ အကူအညီ ပီးရဖို.လဲ မောင်သျှေ" ဟုမီးသောအခါ ။ စိန်ကျော်လှက " ဟုတ်ပါယင့် အခင်ကြီး၊ အကျွန်နံမည် စိန်ကျော်လှလို.ခေါ်
ပါရေ၊ အဂုပိုင် မိုးရာသီမှာ ဒေရွာကို လာရစွာက ၊ဒေမိကျောင်းတက်ရွာမှာ လယ်တစ်မိုးအငှားခံ ချင်လို.ပါ၊ တစ်နှုစ်ကိုစပါးအတောင်း ၁၀၀ ပီးပါ" ဟု ပပွင့်လလင့် ပြောလာသောပြောလာသော စိန်ကျော်လှအား ရွာလူကြီးက တွိတွိချင်းသဘောကျလေသည်။
"အေး၊ မောင်ချေ... အခင်ကြီးရို.မှာလဲ၊ လယ် ၀ါး ၂၀၀၀ ကျော်တောင်ဟိရေ၊ အငှားသား နောက်ထပ် တစ်ယောက်လိုနိန်စွာနန်. ကွတိယာ။ မင်း ငါရို.အိမ်မှာ နိန်။ ငါရို.အိမ်မှာလုပ်ဖိ" စိန်ကျော်လှသည် ပျော်လုံးဆို.လျက်" အကျွန် သစ္စာဟိဟိ၊အလုပ်ကြိုး
စားလုပ်ပါမေ။ အခင်ကြီး၊ ကကောင်းကျေးဇူတင်ပါရေ၊" ဟုကတိပီးလိုက်လေသည်။ ထိုနောက် ရွာလူကြီး သည် သူသမီး အငယ်ဆုံး စိန်သန္တာ အား စိန်ကျော်လှ နှင့် မိတ်ဆက်ပီးလေသည်။ ပပွင့်လလင့်နှင့် ခင်မင်စရာ ကောင်းသော စိန်ကျော်လှအား ရွာ
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
စိန်ကျော်လှသည် အလုပ်ကို မခိုမကပ်လုပ်ပြီး အစီအမံကောင်းမူးကြောင်း ရွာလူကြီးလည်းတစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ချမ်းသာလာလေသည်။ သုံးနှစ်၊သုံးမိုး မခိုမကပ် အလုပ်ကြိုးစားလုပ်သော စိန်ကျော်လှအား မိကျောင်းတက် တစ်ရွာလုံးက ကိုယ်ရွာသားအရင်း
ခခေါက်ပိုင်ခင်မင်ကတ်လေသည်။ စိန်သန္တာမှာလေး စိန်ကျော်လှကို စိတ်ထဲ၌ ကြိတ်၍ ချစ်စိတ်ဝင်နိန်လေသည်။ ယကေလေ့ စိန်ကျော်လှမှာ သူမကို မောင်နှမ အချစ်နှင့်ရာချစ်နိန်သောကြောင့် နားမလည်နိုင်ပါ။ ပုရွက်စိနှင့်သကာမှာ သကာလာရိုးထုံးစံ
မဟိပါ။ အမှန်မှာ စိန်ကျော်လှလည်း သူမကို မိတ္တာ သက်ဝင်လျက်ဟိပြီး အထင်လွဲမှာ;မည် စိုးသောကြောင်ဟန်ဆောင်နိန်ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
တနိ။ စပါးပင်ချေတိ လီပွီချေတိနန်.အတူ ယိုင်းနွဲကနိန်သည်။ စိမ်းစိုနိန်ရေ စပါးပင်ချေတိကြား၊ အီးမြကြည်လင်ရေ လီချေတိသျှူလျက် စိန်ကျော်လှ တစ်ယောက်ထဲပျိုးနှတ်နိန်လေသည်။ စိတ်ထဲမှာလည်း လီးနိန်ရေပိုင်၊ပေါ့နိန်ရေပိုင်ခံစားနိန်ရသည်။
အမည်ဖော်မပြနိုင်သော စိတ်အာရုံတစ်ခုနှင့် စိန်ကျော်လှကျင်ကိုင်နိန်ရသည်။၁၁နာရီ ကျော်လားစွာကိုပင် စိန်ကျော်လှအရိပ်မကျလိုက် စိန်သန္တာ ထမင်းကျိပ်ဆွဲလျက် ကန်းသင်းထက်က လှမ်းခေါ်မှ သတိပြန်ဝင်လာသည်။ "ကကောင်းအလုပ်ကောင်းစွာ
ပါမလား၊ အသူအတွက်ချင့်၊ ထမင်းလားစား အနားယူခလိုက်ပါဖိ၊ကိုစိန်ကျော်လှ" ဟုစိန်သန္တာက ရီလာမြောင်းပီး အစဖော်ပီးလိုက်သည်။ စိန်ကျော်လှသည် သူမကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ခမောက်ထက်၌ထိုင်လျက် ထမင်းကို မစားချင်၊စားချင်စားနိန်သည်
။စိန်သန္တာကိုလည်း စကားတစ်ခွန်းလေ့ပြန်မပြောပါ။ စိန်သန္တာ လေ့ စိန်ကျော်လှကို နားမလည်စွာနှင့် တတိန်းချေ အကဲခတ်နိန်သည်။ တနားချေ အကြာတွင်စိန်ကျော်လှသည် တစ်စုံ တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ပြီး စကားစလာသည် " သန္တာ.... နင့်ရို.အိမ်မှာ
ငါ အလုပ်လုပ်စွာ ၃ နှစ် ၃မို. ကြာယာဟေ......။ ငါ့ကို အနှုံလက်နန်. ရွှေခွက်ကို နှိုက်ချင်ရေလို. မစွပ်စဲကေ့ ဖိ..။ ထိုမှာ ကြည့်လိုက် စပါးပင်ချေတိ ယိန်းက နိန်ကတ်တေမလား။ ယင်းစပါးချေတိပိုင် ငါ့နှလုံးသားလေ့ နင့်နန်. စဆုံတွိရေ နိကပင်......"
စိန်ကျော်လှ စကားမဆုံလိုက် စိန်သန္ထာ လယ်စွ ကန်းသင်းတိအတိုင် အ၀ီးကို ပြီးထွက်လားလီသည်။ စိန်ကျော်လှမှာ သူ.စကားလွန်လားသည်အထင်နှင့် သူမနောက်သို. ထမင်းလောင်ပွန်းကိုချလျက် အပြီးလိုက်လာသည်။ အဆုံးမဟိသော စိမ်းစိုရေ လယ်ပြင်တိကို
ဖြတ်လျောက်ဗြီး ပြီးနောင် စိန်သန္ထာဗြုန်းဆိုရပ်လိုက်သည်။ စိန်ကျော်လှ သည် သူမအပါးသို. စိုးရိမ်စိတ်နှင့်တိုးကတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆိုင်လိုက်စဉ်တွင် သူမမျက်နှာတွက် အပြုံးတိ မိုးရာသီ ပန်းချေတိပိုင် ပွင့်လန်းနိန်သည်မြင်လိုက်ရသည်။
စိန်ကျော်လှသည် ၀မ်းသာလုံးဆို.လျက် စကားအထစ်ထစ်ဖြင့် " သန္ထာ.... နင်... ငါ့..ငါ့ ကို ချစ်တေ မလားယေနန်း" ဟုပြောဆိုလျက်မိမိ၏ အချစ်ချေကို ရင်ခွင်ထဲ ထိုးသွင်းပွေ.ဖက်လိုက်သည်။ စိန်သန္ထာလေ့ အလိုက်သင့်လိုက်ပါလျက်" အေမှာ စောင့်နိန်
ရစွာ ၃နှစ် ၃မိုးဟိယာ၊ ကိုစိန်ကျော်လှ" ချစ်စဖွယ်ပြောလိုက်ချိန်တွင် ချစ်သူနှစ်ယောက်ရို.၏ နှလုံးသားများသည် စိမ်းစိုသောစပါးပင်ချေ၊လီပွီချေနန်.အတူ ယိန်းနွဲလိုက်ပါ ကခုန်နိန်ကတ်လီသည်။
စိန်သန္တာနှင့်စိန်ကျော်လှရို. မင်္ဂလာပွဲသည် တအုန်းအုန်းစည်ကားလီသည်။ ထိုဇနှီမောင်နှံရို. ၏ နှစ်လ၊ရက်များသည် သာယာချမ်းမြေ့၊ပျော်ရွင်စွာကုန်ဆုံးလားလီသည်။ ၁နှစ်နှင့် ၅ လကြာပြီးနောက် စိန်သန္ထာကိုယ်ဝန်ရလီသည်။
xxxxxxxxx ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
စိန်ကျော်လိူင်သည် သူ၏ ဂွ တွင် ကျွဲကျောင်လျှင်အနားယူရန်အတွက် တဲအိမ်ဆောင်လျက်ဟိသည်။ သူသည် အလုပ်၌စိတ်မ၀င်စားဘဲ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်လျက်ဟိသည်။ အုန်းမိုးနိန်သောသူ၏လက်များသည် တုန်လျက်ဟိပြီး ချွဲများလည်း အလုံးလိုက်
ကျလျက်ဟိလေသည်။ သူ၏မျက်လုံးအစုံသည် ပဠေဠိ ဆန်လျက်ဟိပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို အလေးအနက် စဉ်စားနိန် နှင့် ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ရောပွတ်လျက်ဟိသည်။ ကကောင်းမကြာလိုက် သူသည်ဆုံးဖြတ်ချက် အခိုင်အမာ ချလိုက်ပြီ တဲအမိုးထက်က အောက်
သို.ဆင်းလာလေသည်။ ပြီးနောက် သူမယားအား " သန္ထာ အုန်းမိုးဖို. နှီးကုန်လားယာ။ အကို နှီးနည်းနည်းထို.ပီး"ဟုပြောလီသည်။ နှီးတစ်ခါလေ့ မထိုးဖူးသော သူမယားက နှီးမထိုးတက်ကြောင့် ပြန်ဖြေရေခါ "အော် ....သန္ထာကလည်း နှီးထိုးရေ ဆိုစွာ အလွယ့်ချေ
၊ ယာ ဒေဓားကို ကိုင် ဒေပိုင်ကိုင်...။ဒေမှာက ရခွန်း..အေး အေး .. ဟုတ်ယာလာ..ဟုတ်တေ"စသည်ဖြင့် သင်ပြလီသည်။ လင်သည်ကိုချစ်ရသော ၀န်းကြီးမ စိန်သန္ထာသည် မတတ်တတ်နှင့်နှီးလိုက်ထိုးသောအခါ ကကောင်းမကြာသူမ လက်ကိုနှီးပြတ်လား
လေသည်။ စိန်ကျော်လှသည် အသင့်ပျင်ထားသော ဂွမ်းစဖြင့် သူမယား သွီးတိ ကိုသုတ်လိုက်ပြီး အင်္ကျီအိပ်၌ ၀ှက်ထားလိုက်လေသည်။ ဒယောအဆိုးစ တစ်စဖြင့် သူ.မယားလက်ကို ပန်းပီးပြီးနောက် " သန္ထာ ငါ အပေါ တစ်ခေါက်လားလိုက်မေ။ အဂုချက်
ချင်းပြန်လာဖို.စွာရာ" ဟုပြောပြီ သူတစ်သက်လုံးစီစဉ်လာသောအရာကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို. ခြီလှမ်းတိ မိကျောင်းတက်ချောင်းဘက်ကို ဦတည်လိုက်သည်။ သူသည်ချောင်းကမ်းနား၌ ထိုင်လျက် နံမည်မသိသော ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို မန်းမူတ်လိုက်ရာ
ရီထဲက မီးကျောင်းကြီးတစ်ကောင် စင်း၍ပေါ်လာလီသည်။ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နိန်သောထိုမီးကျောင်းကြီးစိန်ကျော်လှအပါးသို.ရောက်လာချိန်တွင် သူသည် ကိုယ်ဝန်သည်မ စိန်သန္ထာ၏ သွီးဂွမ်းစကို မီးကျောင်းကြီးဘက်ကို ပစ်ပေါက်လိုက်သည်။
မီးကျောင်းကြီး၏ လျင်မြန်သော လူပ်ရှားမူသည် ချက်ချင်းရပ်သားလားပြီး စိန်ကျော်လှရှိတွင် ရွှေတုံးကြီးမိကျောင်းအသွင်သို.ပြောင်းလဲလားလီသည်။ သူသည်ထိုရွှေမီးကျောင်းကြီးကို ရီထဲက ဆယ်ယူလျက် မျက်စိနှလုံးကိုဖောက်ပြီးမျိုချလိုက်သည်။
ယင်းနောက်သူသည် ၀ိဇ္ဖာရလျက် မီးကျော်တက်ရွာသို. ကောင်းကင်ခရီးဖြင့်ပျံတက်လားလီသည်။ သူသည် ယောက္ခမ အိမ်ခေါင်ထက်၌ရပ်နားလျက် ...." သမီးတစ်ယောက်ကဆုံးလီယင့်၊ ချောင်းကမ်းနား ရွှေမီးကျောင်းတစ်ကောင်ထားခယင့်၊ သမီးတစ်ယောက်ကဆုံးလီယင့်၊
ချောင်းကမ်းနား ရွှေမီးကျောင်းတစ်ကောင်ထားခယင့်၊ သမီးတစ်ယောက်ကဆုံးလီယင့်၊ ချောင်းကမ်းနား ရွှေမီးကျောင်းတစ်ကောင်ထားခယင့်၊" စသဖြင့် ၃ကြိမ်တိုင်တိုင်အော်ပြောလျက် ကောင်းကင်ကို ပျံတက်ပျော်ကွယ်လားလီသည်။ ရွာလူကြီးလည်း အသံကြား၍ အရုပ်မမြင်လိုက်ရသောသူ.သမက် စကားကို ဝေခွဲမရ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နိန်လီ၏။ ယေဘင်ကေလေ့ ရွာသားတိ ကိုခေါ်ယူလျက် မီးကျောင်းတက်ချောင်းနားကို လားကြည့်သောအခါ စိန်ကျော်လှ ပြောခရေအတိုင် ရွှေမီးကျောင်းတစ်ကောင် တုံးစင်း စင်းနိန်လီ၏။ ထိုမှတစ်ခါ စိန်ကျော်လှ ဂွ ကိုလားကြည့်သောအခါ ဆောက်လုပ်စ တဲအိမ်ထ၌ စိန်သန္ထာ ကိုယ်ဝန်အပြည့်နှင့် သီဆုံးနိန်သည်ကို ၀မ်းနည်းကြွီကွဲစွာတွိဟိရကတ်လီသည်။ ထိုနိန်.မှစ၍ သိုက်ဆရာ စိန်ကျော်လှအကြောင်းသည် မီးကျောင်းတက်ရွာတွင် ဆွေမျိုးစဉ်ဆက်ပြောပြကတ်လီသည်။
Posted by KingMarayu at 13:240comments
ကျွန်းသားငမန်း အေးမောင် နှင့် စစ်တွေမြို့ က စက်သီး
ကျုပ်လလူး၊ပြာလလူး နှင့် ပိန္နဲချောင်းကျွန်းတွင် မွီးဖွားခသော ကျွန်းသားငမန်းအေးမောင် တစ်ယောက် ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ၈တန်းကို အောင်မြင်လီသည်။ ထိုအေးမောင်အား အမိ၊ဘ ဆင်းရဲ၍ ကျောင်းဆက်မထားနိုင်သဖြင့်သူ.အဖက စစ်တွေမြို. ဘုရားကြီးနောက်တွင်တည်ဟိ
သော ဘုန်းကြီးတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌အပ်နှံလီရာ သူသည် ဘုန်ကြီးကျောင်းသား ဂုဏ်ကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၌ ထိုက်တန်စွာ ဆွတ်ခူးရဟိလီသည်။ အေးမောင် ၏ ကံဇာတာကို တွက်ချက်မိသော သူ.အဖက အထက်တန်းပညာ သင်ကြားရန်
လယ်မထွန်ခိုင်းဘဲ စစ်တွေမြို. ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၌ အပ်နှံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားအေးမောင်သည် အမှတ်(၂) ကျောင်းသို. တထည်တည်းဟိသော ကျောင်းစိမ်းဒယော ကိုဝတ်လျက် ဘ၀င် သုံးပိဿာ ဖြင့်အထက်တန်းပညာ
ရပ်များကို သင်ကြားလျက်ဟိသည်။ ကျောင်းပထမ တက်စနိ၌ မိမိကိုယ်ကို ဇာကလဲဆိုစွာကို အတန်းထဲ၌ မိတ်ဆက်ရလီသည်။ အတန်းဖော်တိကသူရို.နီရာဒေသကို ၀င့်ကြွားစွာဖြင့် ဖြေကြားလျက်ဟိ၏ ။ ဥပမာ...ကန်းနားလမ်းက၊ကျောင်းတက်လမ်းက
၊မိဇံက ထိုသို.ဖြေကြားကတ်လီသည်။ ကျွန်သား အေးမောင် အလှည့်သို.ရောက်သောအခါ သူ၏အဖြေကြောင့် တတန်းလုံး ရွာပြိုအောင်ရယ်ကတ်လီသည်။ ပဇာကြောင်းဆိုသော် သူ၏အဖြေမှာ "ဘုန်းကြီးကျောင်းက" ဟု၍ ဖြစ်၏။ ကျွန်းသား အေးမောင်
သည် စစ်တွေမြို. သမ အတန်းဖော်တိ ဘက်တွင် အဟားခံရသော်လည်း ဆရာမ က ပပွင့်လလင့် ရရိုးသသား ပြောသည်ဟုချီးကျူးလီသည်။ ထိုကျွန်သားအေးမောင် ကျောင်းသို.လာလျှင် တချို.အတန်းဖော်ကောင်မချေတိက ဆရာတော်လာရာ လမ်းဖယ်
ပီးကတ် စသည်ဖြင့် အော်ကတ်လီသည်။ ယေဘင်ကေလေ့ အေးမောင်၏ သူငယ်ချင်းများမှာ ကောင်မချေအများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ပဇာကြောင့်ဆိုသော် အေးမောင်သည် ၉တန်း အင်္ဂလိပ်စာ တိကို အထစ်အငေါ မဟိဘဲ အရည်ကြိုသောက်နီခြင်းကြောင့်
ဖြစ်ပါသည်။ အေးမောင်အတန်းတွင် မမချေတိ အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့ကတ်လီသည်။ထိုဟာကွက်အား အေးမောင် ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နိဒါန်းရှည်လားစွာကို တောင်းပန်ပါသည်။ ပြောသျှင်သည်မှာ စက်သီးကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ အေးမောင်သည် ငါးခူတစ်ကောင်ကို ရီထဲ၌ စမ်းဖမ်းနိုင်သည်။ ငါးမျှားရန် ကျွဲကူးမြစ် အလယ်ကျောက်ကို ကိုင်းတန်ကို ပါးစ မှာကိုက်လျက် ကူးနိုင်ပါသည်။ ရီဘဘောင်းပြည့်နိန်သော လယ်ဇွ တွင် တစ်ရက်လုံးဘောလုံးကျောက်နိုင်သည်။ ယကေလေ့ ကျွန်းတွင် စက်သီးပင် မဟိ၍ အသက် ၁၃၊၁၄
အရွယ်ထိ စက်သီမမြင်ဖူးပါ။ စစ်တွေမြို.တွင် စက်သီးစီးနိန်ကတ်သော ကောင်ချေ၊ကောင်မချေတိ ကိုကြည့်လျက် အေးမောင်သည် စက်သီးစီးချင်စိတ်နှင့် ကျင်ကိုင်နိန်ရလီသည်။ ထိုကြောင့် စက်သီး စီးစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် အေးမောင် ဆုံဖြတ်လိုက်ပါသည်။ ဆရာ
တော်က ၀ါကျွတ်လျှင် ပီးသော ဒင်္ဂါး အသစ်ချေတိ ကို စုထားလျက် နွေရာသီ တွင် စသီးချေ ငှားလျက်အသားကုန်လေ့ကျင့်လီသည်။ စက်သီး မူန်.စိချေ နှင့်ကျင်ကိုင်နိန်သောဘဘောင်သံ ဘုန်းကြီးကျောင်း သားအေးမောင်ကို ကုန်တန်းက ရီခတ်ရန်လာသော
ကောင်မချေတိက နိတိုင်း ၀ိုင်ဟားကတ်လီသည်။ ဇာပိုင်ဘင်ဆိုဆို အေးမောင်သည် ဇနက မင်းသားလုံးလဖြင့် ခြီကျိုး၊ ဒူးက သွီးတိ စစယိုအောင်ထိ အသားကုန် ကျင်ကိုင်လီရာ ၂ လအကြာတွင် စီးတက်လာလီသည်။ ထို စီးတက်သည့်နိတွင် မိူရမျက်နှာမျိုး
နှင့် စက်သီးကို အသားကုန်နှင်းလျက် ပိုင်ချင်အိမ်သို.လားအပ်ရာ အရှိန်ကို မထိန်းနိုင်ဘဲ ၀င်္ကဘာကွင်း၌ မုန်းတီဆိုင်မှ မုန်းတီသောက်နိန်သော အသက် ၄၀ အရွယ်အရီးတစ်ယောက် တင်သားကို ၀င်တိုက်ရာ ထိုအေးမောင်မှာ ဆီးဆောက်ကရောက်နှင့်
ကြုံရလီသည်။ မုန်.တီသယ်မသည် အေးမောင်ကို ပန်းတိဖြင့်ကြဲချလီသည်။ အေးမောင်လည့် ပုရစ်ချေ မျက်နှာဖြင့် စစ်သီးကို ဆက်စီးလားလီသည်။
နောက် ၃ လခန်.အကြာတွင် တစိချေ ကျွန်းပါလတ်လီသည်။ခင်မင်ရသော မြို့သားသူငယ်ချင်းတိက အေးမောင်အား ညဇာဘက် စစ်တွေမြို.တစ်ခုတည်းသော လမ်းမကြီးထက်သို.စက်သီးစီရန် လာခေါ်ချိန် စာမဖတ်ဘဲ မျော်တက်လာလီသည်။ ဆရာတော်
သိလျှင် အောက်သကော် အနှက်ခံရမည်ကိုကြောက်သဖြင့် ကိုယ်ဖွပညာကို တရုတ်သိုင်းစာအုပ်တိဖတ်လျက်လေ့ကျင်ထားရလီသည်။ဒေပိုင် စက်သီးမစီးတက် စီတက်အချိန်တွင် မြို.ထဲ စက်သီးစီးထွက်ရသော အရသာသည်ရွီးပြရန်ခက်ပါသည်။ တညနိန်တွင်
စက်သီးအင်ဒန်စီးတတ်နိန်ယာဖြစ်သော ထိုအေးမောင်အား သူငယ်ချင်း ၄ယောက်က တဘက်နှစ်ယောက်စီကြားညှပ်လျက် လက်မကြီးထက်စက်သီးစီထွက်ကတ်လီသည်။ ကကောင်းမကြာလိုက် Palace ဟိုတယ်ရှီအရောက်တွင် ဘဘောင်းမြည်ပနာ
တန်းသိမ်ပြတ်လဲကျရာ ထိုမြို.သားသူငယ်ချင်းများမှာ ကျွန်းသားအေးမောင်ကြောင့် စလောင်းပေါ် အရှက်ကွဲရလီ၏။ ထိုနိမှစ၍ အေးမောင်အား မည်သူတစ်ယောက်မျှ ညဇာဘက်၌ စက်သီးစိ မခေါ်ဝံ့ဘဲ ဟိကတ်လီသည်။
ယကေလေ့ အေးမောင်သည် စက်သီးစီးခြင်းအတက်ပညာအား ဆက်လက်ကြိုးစားလျက်ဟိသည်။ တရက်နိတွင် ကျောင်းသို. စက်သီးစီလျက် အေးမောင် ထွက်လာလီသည်။ သူ၏ ဘ၀င်များသည် ရိုးမတောင်ထက် မြင့်လျက်ဟိပြီး မျက်နှာမှလည်း
ရည်စားဘားက အဖြေရကဲ့သို. ပြုံးလျက်ဟိသည်။ စက်သီး ဟန်းဒရွက်(Handle) ကိုလည်း လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် သတိထားကိုင်လျက် အမှတ်(၂) ကျောင်းသို. မယင် မနှေး အရှိန်ဖြင့်နင်းလာလီသည်။ ဘုရားကြီးအကျော် ကျားရုပ်ကျောင်းနားအရောက်တွင်
ကုန်တန်းမှ ရိန်နာသတ် ဆဗွီ တစ်ဖွဲ. အေးမောင်အနားတိုးကတ်လာပြီး စက်သီးစီးလျက် ဇိန်တွိနိန်သော ထိုအေးမောင် ဒယောကို ဖြီချလိုက်လီသည်။ ဤတွင် အေးမောင်သည် အခက်အခဲ့ အကြီးအကျယ်တွိလီပြီ။ ဟန်းဒရွက်ကို လက်တစ်ဘက်ကိုင်လျှင်
မထိန်းတတ်၍ မြောင်းထဲထိုးကျမည်။ ပြီနိန်သော ဒယောကို လက်တဘက်ဖြင့် မကိုင်ထားလျှင် လူလယ်ကောင်၌ တဒုံဖလင် အရှက်ကွဲနိုင်သည်။ ဇာပိုင်လုပ်ရဖို.လဲ။ ဒယောကလည်း တဖြည်းဖြည်းပြီ ကျလာလီသည်။ မထူးယာ အရှက်တော့ အကွဲမခံနိုင်ဟု အေးမောင်ဆုံးဖြတ်ချ ချလိုက်သည်။ ပြီးနိန်သော စက်သီးကို ညာဘက်လက်ဖြင့် ကြိုးစားထိန်လျက် ပြီရ် နိန်သော ဒယောကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ကြိုးစားဝတ်လေရာ ထင်ထားခသိအတိုင် စက်သီးကို မထိန်းနိုင်ဘဲ အနားက လူတစ်ယောက် အားရဘားရတိုက်လျက်
နာလာကြောင်း သို. နှစ်ယောက်စလုံး အရှိန်နတ် လူးကျလီသည်။ ကံကောင်းထောင်မ၍ ခြီမကျိုးခပါ။ အတိုက်ခံရသောလူသည် မှန်ပါဖို.အစား ဖင်တတုန်းနှင့် ခွီနိန်သော အေးမောင်ကိုကြည့်လျက် သနားသဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို.အရောက် ပို.လိုက်ရလီသတည်း။
Posted by KingMarayu at 17:120comments
Labels: မရာယ်ရဂေ လျော်ပီးမေ
Posted by KingMarayu at 19:190comments
Posted by KingMarayu at 19:020comments
ငါ့ ကို ကူပါ ကယ်ပါလို့
ထို ဘုရား ပုထိုးတိက
ငရို. အဖ တစ်ယောက်
အဖက ငါ့ကို အယင်ကူဖို့
ငါ ..ပူပေါင်း ကူညီ
အဖ ကို ငါ ကတိပီးလိုက်တေ........................။
Posted by KingMarayu at 20:550comments
ကာရံ နဘေ မဟိရေ
ငါ နှလုံးသား ခုန်ချက်တိ
အားရ၊ဘရ ခုန်ဆင်းချင်ရေ ...............။
ဒုက္ခ နန်. အထီးကျန်
ငါ့ ဘ၀ နိရက်တိ နန်.
ငါ ...ကို အယင်ပီးဖိ.............။
Posted by KingMarayu at 20:450comments
အသက် ဘ၀ တိ
အဘာသိရေ နန်း ......
အဘာသိရေ နန်း ..........။
ယင်းသူရို. သဘောထားကြီး စွာ
ရုန်းထွက်ရေ ခါ ၀ါ
အစွာပိုင် ပျင်ရဖို. ရောင်......
Posted by KingMarayu at 20:410comments
၄ တန်းက ထွက်ပြီးကေ
စိတ်မကူး ပါဂေ့ ဝေ ................။
စာ ကိုဖတ်ပါ ဝေ ....................။
အပျော် မလိုက်ပါဂေ့ ဝေ
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ပါ ဝေ ..............။
ဘ၀ ကို တစ်ခါလေ့
အဖ နန်. ဘ၀ ကို
အဖပြည်ကို ပြန်သတိရ ပါ ဝေ ......။
Posted by KingMarayu at 20:360comments
အယင်ခေါက်ခါ အကျွန်ရို. ရက္ခတိုင်းက ကျွန်းရွာချေ တစ်ရွာမှာ ကလေချေ တစ်ယောက် ကစပ်ကစပ်နီယင်း ရင်ရဲစိ တစ်စိ ကောက်ရပါရေလတ်။ ယင်း ရင်ရဲစိကို မြင်ရေခါ ယင်းကလေချေစွာ ရင်ရဲစိပိုင် လှရေ မမချေ တစ်ယောက်လိုချင်စိတ်ပေါက်ပါလတ်
တေလတ်။ယေခါ အမိ ဘက်ကိုလားဘနာ " အော...အမိ အမိ သားချေကို ဒေရင်ရဲစိ နန်.တူရေ မယားအလှပချေ တစ်ယောက်ရှာပီးဘလင်" လို.တောင်းရေလတ်။ ယကေအမိသယ်က " အော် သားချေ သားချေ.....အမိက မဟြာ(ရှာ) ပီးနိုင်ဂါ.. နင့် အဖ
ဘားက လားတောင်းခီဘလင်"လို. ဆိုရေလတ်။ ယင်းပိုင်ဆိုခါ သားချေကလည်း အဖသယ်ဘက်ကို လားဘနာ" အော်.....အဘာ အဘာ သားချေကို ဒေရင်ရဲစိ နန်.တူရေ မယားအလှပချေ တစ်ယောက်ရှာပီးဘလင်" လို.တောင်းပြန်ရေလတ်။ ယပိုင်နတ်
အဖသယ်က " ဘာဘာမှာက မဟိကာဝေ၊ မင်း အဘိုးသျှင် ဘားကို လားတောင်းခီ" လို.ပြောလိုက်ပါရေလတ်။ ယင်းတွက်တာနတ် ထိုသားချေကလည်း အဖိုးသျှင်ဘားကို လားဘနာ တောင်းပြန်ရေ။ အဘိုးသည်က အဘောင်မသယ်ဘားက တောင်းခီလို.
အကြံပြုလိုက်တေ။ ယင်းတွက် ယင်းကလေချေ နောက်ဆုံးအနီနတ် အဘောင်းမဘားကို လာရေလတ်။ယေခါ အဘောင်မသည်က " မပူကေ့ ငါ့မြီးချေ၊ အဘောင်သျှင်ဟြာပီးမေ" လို.ဆိုရေ။ အဘောင်မသည်က " မင်းရေ ငရို.ရွာ အရှိဘက် ၃ နာရီလောက်
လမ်းလျှောက်ကေ နပျိုးခြင်း တစ်ခြင်းတွိလိမ့်မေ။ ယင်း နပျိုးခြင်းက ယာသျှင် ၀ါကြီးမ လင်မယား ဘားက တောင်းခီ" ယင်းပိုင် မှာလိုက်တေလတ်။ ယင်းပိုင်နတ် ကလေသျှေရေ သူ.ခရီးကို စတင်လိုက်တေ။ ၃နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရေမှာ သူ.အဘောင်
မသယ်ပြောရေပိုင် နပျိုးခြင်း အကြီးမသန် တစ်ခြင်းတွိရေလတ်။ ယကေ ယင်းယာခင်းထဲကိုဝင်ဘနာ ၀ါကြီးမလင်မယားကို ထိုရင်ရဲစိ ကိုပြရေလတ်။ ယပြီးကေ သူ.ကို ယင်း ရင်ရဲစိ ပိုင်လှရေ မယားတစ်ယောက်ဟြှာပီးဖို. တောင်းပန်ရေလတ်။ ယင်းပိုင်
ဆိုခါ ၀ါကြီးက " အော် မောင်ချေ၊ မောင်ချေ .....ငရို.အိမ် နောက်မှာ နပျိုးပင် ၇ ပင်ဟိရေ။ ယင်းခုနစ်ပင် ထဲက မင်းကြိုက်တေ တစ်ပင် ခွတ်လို.ယူလီ" လို.ပြောရေလတ်။ ထပ်ပြီးကေ မှာလိုက်စွာက ယင်းကလေချေ ရေ ယင်းနပျိုးပင်ကို ထမ်းလို. ရွာကို
ပြန်ရေခါ ဇာလောက်ပင် လီးလီး ရွာက သူ.အိမ်ကို မရောက်မချင်း ယင်းနပျိုးပင်က အပတ်တိကို လုံးဝမခွါရ လတ်။ယင်းကလေချေ လည်းကတိပီးဘနာ ကြိုက်တေ နပျိုးပင်တစ်ပင်ခွတ်လို. ရွာကို ထမ်းပြန်လာရေလတ်။ယင်းပိုင် ထမ်းယင်းထမ်းယင်း
နပျိုးပင်လေး ကကောင်းလီးလတ်တေ။ တစ်ခုပိုင် ထမ်းလိုမပါရေခါ ကလေချေ စဉ်းစားရေလတ် " အော် အပတ်တစ်ပတ် ခွာလိုက်လို. ဇာဖြစ်ဖို.လဲ့ဂု" ဆိုပနာ တစ်ပတ်စခွာ ဘလိုက်တေ။ တစ်ခုလေ့ မဖြစ်ရေခါ ယင်းနပျိုးပင် ကို ထမ်းပနာ ဆက်လျှေက်တေ
လတ်။ ထူးဆန်းစွာက နပျိုးပင်ရေ ပေါ့လားဖို.အစား ပိုပြီးယာ လီးပါလတ်တေလတ်။ ယင်းပိုင် လီးယင်းခွာ ယင်း လီးယင်းခွာ ယင်းနန်. ရွာနားကန်ဘောင်နားအရောက်မှာ ကလေချေ ရေ အားလုံးကို ခွာသတ်ဘလိုက်တေလတ်။ ယင်းပိုင်အားလုံးကိုခွာသတ်
ဘလိုက်တေခါ ယင်းနပျိုးပင်က မိုးကျနတ်သမီးချေတစ်ပါးပိုင် လှပချောမောရေ မင်းသမီးချေ တစ်ယောက်ထွက်ကျရေလတ်။ ယင်းပိုင်ဆိုခါ ထိုကလေ့မေချေက " အော်..မောင်တော်..မောင်တော်...အကျွန် ခြီနန်.လားကေလေ့ ခြီပေါက်ပါရေ၊ လက်နား တွား
ကေလေ့ လက်ပေါက်ပါရေ" လို.ပြောရေလတ်။ ကလေချေလေ့ ကြံစရာဖြစ်နိန်ရေခါ ကန်ဘောင်ထက် ပေါက်နိန်ရေ ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ထက်မှာတင်ဖို.ပျင်ရေလတ်။ ယပြီးကေ ကလေချေက "အော်.. မောင်ကြီး ချစ်နှမ ...ဒေ ညောင်ပင်ကြီထက်မှာ
တနားချေနီ၊ မောင်ကြီးအိမ်က မြင်းဂါရီ လားယူဘိုက်ခီမေ" လို.ဆိုပနာထွက်လားရေလတ်။ ကလေချေ မြင်းဂါရီ လားယူနိန်တုန်းမှာ သူဌေးအိမ်က အရုပ်ဆိုး ပြည့်ဝန်းမ လည်း ကကောင်းဆင်ပနာ ထိုကန်ကို ရီခတ်ဖို.ဆင်းလာရေလတ်။ ကန်ဘောင်ကို
ရောက်တေခါ တစ်ကန်လုံး ထထိန်လင်းနိန်စွာကို ပြည့်ဝန်းမ မြင်ရေလတ်။ ယေခါ ကိုယ့်ဘားက အရောင်ထွက်တေထင်ဘနာ " သူဌေးအိမ်က ပြည့်ဝန်းမ အရောင် ကန်လုံးပြောင် ဒိန်နနောင် ဒိန်နနောင်" ဆိုပြီးနာ ရီခွက်ကို ချလို. ကရာ ကယာလတ်။ ယင်း
ပိုင် ကနိန်စွာကို ညောင်ပင်ထက် ကလိန်.မေချေ မြင်ရေခါ အအူပိန်ပါအောင် ရယ်မိရေလတ်။ပြည့်ဝန်းမလည်း အရောင်တိလာရာဘက်ကို ကြည့်လိုက်တေမှာ... အရောင်တိစွာ သူ.ဘားကလာစွာကမဟုတ် ဒေကလိန်.မေချေ ဘားက လာစွာရာမလားဆိုပနာ
မနာလို ၀န်တိုစိတ်တိ ဖြစ်မိရေလတ်။ ပြည့်ဝန်းမ လည်းညောင်ပင်အောက်ကို လားဘနာ ယင်းကလိန်.မေချေဘားက ကွမ်းယာ တစ်ယာ တောင်းရေလတ်။ မမချေက ကွမ်းယာ မဟိလို.ပြောရေခါ " မချေ မချေ....ကွမ်းမဟိကေ ညောင်ရွက်ကို ကွမ်းလုပ်၊
ကွမ်းသီးမဟိကေ ညောင်သီးကို ကွမ်းသီးလုပ်၊ ထုံးမဟိကေ ညောင်စိကို ထုံးလုပ်" လို.ပြောရေလတ်။ ယင်းပိုင်ဆိုခါ ကလိန်.မေချေ ကလည်း " ဟုတ်ပါယင့် မမ ယင်းပိုင်ဆိုကေ အကျွန်လုပ်တက်ပါရေ ဆိုပါနာ ကွမ်းတစ်ယာ ယာလို. ကမ်းပီးရေလတ်။
ယင်းပိုင် ကမ်းပီးစွာနန်. ပြည့်ဝန်းမရေ ယင်းကလိန်.မေချေ လက်ကို ဆွဲဘနာ ကန်ထဲမှာ မြှပ်သတ်ဘိုက်တေလတ်။ ယပြီးကေ သူမရေ ညောင်ပင်ထက်မှာပပိုက်နနစ်ထိုင်နိန်ရေလတ်။ ထို ကလိန်.မေချေ လည်း ကန်ထဲမှာ ကြာပန်းချေ ဖြစ်လားရေလတ်။
ယပိုင်နတ် ကလေချေ မြင်းလှည်းနန်. ပြန်လာရေခါ သူ.မယားရေ ကကောင်းအရုပ်ဆိုးလားစွာကို စဉ်းစားလို.မရဖြစ်နိန်ရေလတ်။ ယေဘင်ယေဂေလေ့ ငါမယားဆိုးဆိုး လှလှ ငါယူရဖို.ဆိုပနာ ပြည့်ဝန်းမကို မြင်းဂါရီထက် တင်ပြီးကေ အိမ်ကို ခေါ်လားရေလတ်။
ယင်းပိုင် ယင်းကလေချေ လည်းပြည့်ဝန်းမနန်. ပေါင်းသင်းနီထိုင်လီယာလတ်။ တနိ ယင်းကလေချေ ကန်ကို ရီ ခတ်ဖို.ဆင်းလာရေခါ တန်းထ(တံတား) နားမှာ ကြာပန်းချေတစ်ပွင့်မြင်ရေလတ်။ ယင်းကြာပန်းရေ အရာလူတိ ရီခတ်လာကေ ကန်အလယ်ဂေါင်
မှာဇီ နိန်ပြီးကေ ယင်းကလေချေ ရီခတ်လာယာဆိုကေ တန်းထ နားမှာဇီလာနိန်ရေလတ်။ ယင်းပိုင် တစ်ရက်မဟုတ် နှစ်ရက် ရက်ပြတ် မြင်ရေခါ ယင်းကလေချေ ယင်းကြာပန်းကို အိမ်ကိုခူးယူလာရေလတ်။ ယပြီးကေ သူရို.လင်းမယားအိမ်တေ ဂေါင်းရင်း
မှာထိုးထားရေလတ်။ ယင်းပိုင် ပြည့်ဝန်းမ လင်မယားအိပ်ယာဆိုကေ ထိုကလိန်.မေချေရေ ကြာပန်းကထွက်ပနာဇီ ပြည့်ဝန်းမ အဂေါင်းကို ကျောက်တေလတ်။ ပြည့်ဝန်းနိုးကျလာကေ ကြာပန်းထဲကို ပြန်ဝင်ပြီးလာရေလတ်။ ယင်းပိုင်နတ် ပြည့်ဝန်မ လည်း
ဂေါင်းမူဝေဒနာ ခံစားရရေလတ်။ ပြည့်ဝန်းမရေ ကြာလာခါ ယင်းကြာပန်းကို သံသယ ၀င်လာရေလတ်။ ဒေပန်းရောင်ခါတည်းကပင် ငါဂေါင်းမူးရေ ဆိုပနာ ယင်းကြာပန်းကို ဓားနန်. အပိုင်းပိုင်း စိုင်းဘလိုက်တေလတ်။ ယပြီးကေ ရွာကြားက ၀ါကြီးမလင်မယား
တပ်နားမှာ ၀ဲပိုက်ဘိုက်ခီရေ။ ကကောင်းမကြာ ယင်းကြာတိုကြာဇ တိက ၀ရစ် ပင် တစ်ပင်ပေါက်လာရေလတ်။ ယင်း ၀ရစ်ပင်ကြီးလာရေခါ ၀ရစ်သီးတိ အပြွတ်ပြွတ်အခိုင်ခိုင်သီးရေလတ်။ ၀ါကြီးလင်မယားလည့် ၀ရစ်သီးတိကို ဆွတ်ပနာ စားကိုစား ရောင်း
စွာကိုရောင်း ပီးစွာကိုပီး ပီးဘလိုက်တေခါ တပင်လုံးကုန်ရေလတ်။ ယကေလေ့ အပင်ထိပ်ဆုံးမှာ ၀ရစ်သီးတစ်လုံးကျန်လိုက်တေလတ်။ ၀ါကြီးလင်မယားလည်း ထို နောက်ဆုံးအသီးကို မစားဝံ့ဘဲ ထမင်းချက်ခန်းက ကြတ်စင်မှာ တင်ထားရေလတ်။
ယင်းဝါကြီးမ လင်မယားရေ ဆင်းရဲလို. တောထဲက ထင်းခွီပနာ ဇီ အသက်မွီးဝမ်းကျောင်းပြူရလေလတ်။ယင်းပိုင် ၀ါကြီးမ လင်းမယားထင်ခွီဖို.လားနီစဉ် ယင်းကလိန်.မေချေရေ ၀ရစ်သီးက ထွက်ပနာ ထမင်းဟင်းချက်ရေလတ်။ ပြီးယာဆိုကေ ၀ရစ်သီးထဲကို ပြန်
၀င်လားရေလတ်။ ၀ါကြီး၊၀ါကြီးမ လင်မယားပြန်လာရေခါ ထမင်းတိ ဟင်းတိ အဆင်သင့်ချက်ပြီးနိန်စွာကိုဇီ တွိရေလတ်။ ယင်းပိုင် နိတိုင်းဖြစ်လာရေခါ ၀ါကြီးမက " ၀ါကြီး ......အိမ်မှာစောင့်ကျန်လိုက် အသူထမင်းလာချက်လေကြည့်ထား ငါထင်းခွီလား
လိုက်မေ" ဆိုရေလတ်။ ၀ါကြီးလည်း အိမ်မှာ စောင့်နိန်ယင်း စောင်နိန်ယင်း ဖဖူရောင်ပါအောင် အိပ်ပါလားရေလတ်။ ထိုကလိန်.မေချေ လည်း ၀ရစ်သီးကထွက်ပနာ ထမင်းတိ ယင်းတိ ချက်ပြီးရေခါ၊ အိပ်နီရေ ၀ါကြီး ဖင်ဝမှာ ကွမ်းတစ်ယာညှပ် ဘခသိမ့်ရေ
လတ်။ ၀ါကြီးမပြန်လာရေခါ ကွမ်းတစ်ရာ ဖင်ဝဆို.လို. အိပ်နီရေ ၀ါကြီးကို နိုးဘနာ တ၀ ဒေါသထွက်တေလတ်။ ယပြီးကေ ၀ါကြီးမက " ထင်းခွီဖို. လားလီ ငါစောင်းမေ မိုးထခါ ဆိုပြီးနာ" ၀ါကြီးကိုထင်းခွီလွတ်လိုက်တေလတ်။ ယင်းပိုင် ၀ါကြီးမလည်းထိုင်
စောင့်နိန်ရေခါ အိပ်ချင်ပါလတ်တေလတ်။ ယကေလေ့ မအိပ်ပါအောင် လက်ကို စက်ဓားချ နန်.ဇီလှီပနာ နံသာခွတ်မှာဇီစိမ်ရေလတ်။ ယင်းပိုင်နန်. ကလိန်.မေချေ ကလည်း ၀ါကြီးမ အိပ်ပါလားရေ အထင်နန်. ၀ရစ်သီးထဲက ထမင်းချက်ဖို.ထွက်ပါလတ်တေလတ်။
အကွက်ချောင်းနီရေ ၀ါကြီးမလည်း ဇာသူလေ နင်ဆိုပနာ သူမလက်ကို ဆွဲဖမ်းလိုက်ရေလတ်။ ကလိန်.မေချေကလည်း သူမအကြောင်းကိုချင်းပြလိုက်တေလတ်။ ၀ါကြီးမလည်း သနားဂရုနာ သက်ဘနာ သူ.ရို.မလည်း သား သမီးမဟိရေ အတွက်နန်. ယင်း
ကလိန်.မေချေကို အိမ်မှာ မွီးစားလိုက်တေလတ်။
ယင်ပိုင် ရက်တိ၊လတိ ကုန်လားရေခါ ပြည့်ဝန်းမလည်း ကိုယ်ဝန်ရင်းပါလတ်တေလတ်။ မွီးဖို.နိခါ ၀ါကြီးမ က မီးစောင့်ဖို.လားဖို.ပျင်နိန်ရေခါ ထိုကလိန်.မေချေက ယင်းပြည့်ဝန်းမ အိမ်ကို သူမလည်းလိုက်ချင်ကြောင်းပူဆာရေလတ်။ ယင်းအိမ်သို.ရောက်ရေ
ခါ လူတိနန်. ရရောင်သတ်လို. မီစောင့်ဖို.ရောက်နီကတ်တေလတ်။ ရွာထုံစံအတိုင်း ယင်းကလိန်.မေချေ က ၀တ္ထူ တစ်ပုဒ် ပြောပြချင်ကြောင့် ယင်းလူတိကို ခွင့်တောင်းရေလတ်။ လူတိက ခွင့်ပြူရေခါ ယင်းကလိန်.မေချေစွာ သူမ၀တ္ထူကို စပြောပြရေလတ်။
"အယင်ခေါက်ခါ အကျွန်ရို. ရက္ခတိုင်းက ကျွန်းရွာချေ တစ်ရွာမှာ ကလေချေ တစ်ယောက် ကစပ်ကစပ်နီယင်း ရင်ရဲစိ တစ်စိ ကောက်ရပါရေလတ်။ ယင်း ရင်ရဲစိကို မြင်ရေခါ ယင်းကလေချေစွာ ရင်ရဲစိပိုင် လှရေ မမချေ တစ်ယောက်လိုချင်စိတ်ပေါက်ပါလတ်
တေလတ်။ယေခါ အမိ ဘက်ကိုလားဘနာ " အော...အမိ အမိ သားချေကို ဒေရင်ရဲစိ နန်.တူရေ မယားအလှပချေ တစ်ယောက်ရှာပီးဘလင်" လို.တောင်းရေလတ်" ယင်းပိုင် ၀တ္ထူ ကို အစ အဆုံးပြောပြလိုက်တေခါ ယင်းဝတ္ထူ ကို နားထောင်နိန်ရေ ထိုကလေချေ လေ့ ပြည့်ဝန်းမလိမ်စွာတိကို ချက်ချင်း သဘောပေါက်လားရေလတ်။ ၀တ္ထူ အဆုံးမှာ ယင်းကလေချေနန်. ကလိန်.မေချေ ချစ်သူနှုစ်ယောက် ၀မ်းနည်းဘနာ ဖတ်လို.ငိုကတ်တေလတ်........ယကေ ရင်ရဲစိ ၀တ္ထူ နားထောင်ကတ်တေ ပရိတ်သတ်ရို. ပြည့်ဝန်းမ ကို ဇာလုပ်ဇီချင်ပါလေ အကြံပီးကတ်ပါ................။
အချေခါ နားထောင်ဖူးခရေ ၀တ္ထူကို ပြန်ရွီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင် ပြည်ပရောက် ရခိုင်မိဘတိ အနိန်ဖြင့် ဒေပိုင် ရခိုင်ဝတ္ထူချေတိ ကို မိမိ ချစ်သားချေ သမီးချေ တိကို ပြောပြဘနာ ပျော်ရွင်နိုင်ကတ်ပါဇီ။ ဒေ၀တ္ထူတွင် ယင်းကလိန်.မေချေက ထမင်းချက်ပြီးခါ အိမ်က ကြက်ဖား ကြီးကို မှာစွာတိလည်းပါ ပါရေ။ မမှတ်မိလို. မရွီးလိုက်ပါ။ သိရေဆိုကေ မျှဝီပီးဇီချင်ပါသည်။
Posted by KingMarayu at 20:290comments
Posted by KingMarayu at 00:060comments
ဘာဘာ ကို ဖက်လို.
ငါ့ ကို ...
ငါ့ ကို ပြန်ပီးဖို.
ပြိုင်တူ ရယ်ဖူးရေ ....။
Posted by KingMarayu at 14:26 1 comments
သိုက်ဆရာ ငလုံးတောင်တစ်ယောက် ဒယော ကားရားကားရားနှင့် တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက်နှင့် လူငယ်စုဆောင်းရီးလုပ်နိန်သည်။ သူသည် စိတ်ထားကြံ့ခိုင် ထထောင်မမောင်းလူငယ် အယောက် (၂၀) လိုအပ်လျက်ဟိသည်။အကြောင့်မူကား ထို
လူငယ်ချေတိကို သူ. သိုက်စာအုပ်ညွှန်ကြားချက် ဆင်ဒမော် တောင် သိုက်လိုက်ရာတွင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဆင်ဒမော် တောင်သည် ပိန္နဲချောင်း ရွာနှင့် ချင်ရွာ ကြားတွင်ဟိသည်။ ထိုတောင်သည် ရဖီးချပ်တောက် အနီး ကျွဲကူးမြစ်အစ မှနိန်၍ ပိန္နဲချောင်း
ကျွန်းကို ကန်.လန်.ဖြတ်လျက် မြင့်ဂါရွာသစ် အနီး တွင်အဆုံးသတ်သည်။ ထိုတောင်စွယ်၊တောင်းတန်းများသည် ပိန္နဲချောင်းကျွန်သားများ၏ သက်မွီးဝမ်းကျောင်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သော တောင်ယာလုပ်ငန်းအတွက် အသက်သွီးကြောများဖြစ်သည်။
ထိုတောင်တန်းများထက်တွင် မြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်များဖြစ်တော်မူသော လျှာသျှေဓာတ်၊ မာလာဓာတ် စသဖြင့် ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ဟိကတ်သည်။ သိုက်ဆရာ ငလုံးတောင်သည် ကျွန်တစ်ကျွန်းလုံး ကုန်အောင်ရှာမှ ထိုလူငယ်(၂၀)ကို စုဆောင်း
မိလေသည်။ ပဇာကြောင့်ဆိုသော် သိုက်လိုက်ခြင်းအလုပ်သည် ကံကောင်းလျှင် လရဒတ် ဖြစ်နိုင်ရေပိုင် ကံမကောင်းလျှင် အသက်အန္တရာယ်ကြုံရနိုင်သည်ကို ထိုကျွန်းက လူငယ်တိ နားလည်ထားကတ်သည်။ ထိုလူငယ်(၂၀)ကို သိုက်ဆရာသည် သူ.ရို.တာဝန်
ယူရဖို.အပိုင်းကို စိန်ပြေနပြေ သျှင်းပြနိန်သည်။ "မင်းရို.တိ အသေအချာမှတ်ထားကတ်၊ မင်းရို. တောင်ထက်ကိုရောက်စွာနန်. အေးရမ ကျောက်ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုတွိလိမ့်မေ၊ ယင်းတိုက်အိမ်ကြီးမှာ ပြတင်းပေါက် အပေါက်(၂၀)ဟိရေ။ ပြတင်းပေါက်တစ်ပေါက်
မှာ တစ်ယောက်ကျစီတာဝန်ယူရဖို.။ ယင်းပိုင်တာဝန်ယူနိန်ရေခါ ... မင်းရို.ဘက်ကို နတ်သမီးချေတိပိုင် တဗျင်းလှရေ မမချေ တိ လာမြူဆွေကတ်လိမ့်မေ၊ မင်းရို.လုံးဝ စကားပြန်မပြောကေ့၊ သူရို.ဘားက လက်ဆောင်တိကိုလေ့ မယူဂေ့" ။ ၊ယင်းပိုင် အသေ
လူငယ်ချေတိကလည်း ကတိ တိပီးပြီးနောက် သူရို.ခြီလှမ်းတိကို ဆင်ဒမော် တောင်သို. စတင်ရွိလိုက်ကတ်သည်။ မညုင်းကိုင်းချောင်းကို ဖြတ်၍ စိမ်းစိုသော စပါးခြင်းတိကို ၁ နာရီးခန်. ဖြစ်သျှောက်ပြီးနောက် ဆင်ဒမော်တောင်သို.ရောက်
ဟိလီသည်။ သိုက်ဆရာငလုံးတောင်သည် မြေပုံတစ်ခေါက်ကြည့်လိုက် ကွမ်းတစ်ရာ စားလိုက်နှင့် ထိုသိုက်ဟိရာသို. လူငယ်တိကို ဦးဆောင်ခေါ်လာသည်။ တောင်ထက်သို.အရောက် နောက် မိနစ်(၂၀)ခန်.ကြာလားပြီးနောက် ထိုရဲတိုက်ကြီးကို တွိရလေသည်။
သိုက်ဆရာက တန်းခါးမကြီးနားအရောက် နာမည်မသိသော ဂါထာတစ်ပုဒ်ရွက်လိုက်ပြီးနောက် တန်းခါးမကြီး အလိုအလျှောက်ပွင့်ကျလာလေသည်။ သိုက်ဆရာ ငလုံးတောင်သည် လူငယ်ချေတိကို ပြတင်းပေါက်(၂၀)တွင် တစ်ယောက်စီတာဝန်ချထားလိုက်ပြီး မိမိကမူ အဆောက်အအုံကြီး အနောက်ဘက်ကို ဦးတည်သျှောက်လားလီသည်။ ကကောင်းမကြာလိုက် အလွန်တစ်ရာမှ ထူးဆန်း၊မွီးကြိုင်လှသော မမ ကိုယ်သင်းအနံ.တစ်ခု နှင့်အတူ နတ်သမီးသမျှလှပသော အပျိုမချေတစ်ကျိပ် အပြုံးပန်းကိုယ်စီနှင့် လူငယ်ချေတိဘက်ကို ချဉ်းကပ်လာသည်။ သိုက်ဆရာငလုံးတောင်၏် "အဝေး သတိထားကတ်၊ငါ ရွှေတိ၊ငွေတိကို အထုပ်နန်.ထုတ်နိန်ယာ၊တစ်ချက်ချေ" ဟုသောအသံသည် လူငယ်ချေတိကို သတိဝင်စီလိုက်ပြီး လူငယ်ချေတိကလည်းစိတ်ချ ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်။ ထို မမချေတိ ပြောဆိုသောအသံများသည် နတ်စောင်းတီးသံပိုင် နားဝင်ချိုလှပြီး ဧည့်ခံသော အစာအဟာရရို.သည် မြင်လိုက်သည်နှင့် လျှာရည်ပပေါက်ကျစီသည်။ ယကေလေ့ လူငယ်ချေများသည် သမာဓိကို အာရုံပြုလျက် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သောကြောင့် ထိုမမ ချေတိ မာယာ ကျော့ကွင်းက လွတ်ကင်းလျက်ဟိသည်။ ၁၉ ယောက်မြောက်သော လူငယ်ချေတိထံမှ တုန်.ပြန်မူတစ်စုံတစ်ရာ မရဟိသောကြောင့် ထိုအလှမယ်ရို.တိ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဘက်ကို ဦးတည်သျှောက်လာလီသည်။
" မောင်ကြီးနီကောင်းပါယင့်လား၊ ဒေမှာ အကျွန်ညီမချေ အငယ်ဆုံးကို တစ်ခေါက်လောက်ကြည့်ပါ" စသည်ဖြင့် မိတ်ဆက်ချဉ်းကပ်လာလေသည်။ ထို မမချေတိထဲတွင် အလှဆုံးဖြစ်သော ထိုမမချေနှင့်လူငယ်သည် မျက်စိတစ်ချက်အဆုံခံရပြီးနောက် တင်းထားသော သမာဓိတိ အရည်ပျော်လားလီသည်။ ထိုမမချေက ထိုလူငယ်ချေ အပါးသို.တိုးကတ်လာပြီး စကားစမြည်ပြောလေသည်။"မောင်ကြီး ၊ မဟုတ်စွာတိကို လုပ်မနိန်ပါဂေ့။ မောင်ကြီးပိုင် စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်ဟိရေ လူတစ်ယောက်က ဒေပိုင်စွာတိကို မလုပ်သင့်ပါ။ ညီမချေ မောင်ကြီးကို မြင်မြင်ချင်းစွဲလမ်းမိလို. ဒေပိုင်ပြောစွာပါ။ မောင်ကြီးရာသဘောတူရေဆိုကေ နှမချေနန်.မောင်ကြီးတသက်လုံး အတူနိန်နိုင်ပါရေ" စသဖြင့် သွီးဆောင်ဖျားယောင်းလီသည်။ ထိုလူငယ်လေ့ စိတ်ညွတ်ပါလတ်လျက်"နှမချေပိုင် အလှမျိုးမောင်ကြီးဘ၀မှာ တစ်ခါလေ့ မမြင်ဖူးပါ" ယင်းပိုင်ပြန်ပြောမိလီသည်။ ယင်းနောက်ထို မမချေက" မောင်ကြီး အကျွန်. ကိုပိုင်ဆိုင်သျှင်ကေ၊အကျွန်.နန်. အတူနိန်ချင်ရေ ဆိုကေ ဒေပတီချေကို လိုင် မှာဆွဲလိုက်ပါ။ မောင်ကြီးပိုင်ဆိုင်ချင်စွာတိ အားလုံးပြည့်လားပါလိမ့်မေ" ဟုပြောလျက် ထိုပတီးကို လှမ်းပီးလေသည်။ထိုလူငယ်သည် သိုက်ဆရာ ငလုံးတောင်၏ မယူဂေ့ ဟုသော အသံကို အလှပလှ မကြားနိုင်ဘဲ ထိုမမချေ၏ အပြုံးတိကြား ဖယောင်းတိုင်ပိုင် အရည်ပျော်ကျလားလီသည်။ ထိုလူငယ်သည် ပတီးကို လိုင်ဘင်း၌ စွတ်လိုက်သည်နှင့် အလွန်ကြီးမားသော ရီလုံးကြီးများ ပြတင်းပေါက်တိက ၀င်ရောက်လာကတ်ပြီး တောင်တစ်ခုလုံး ရီပြင်ကြီးအဖြစ်သို.ပြောင်းလဲလားလီသည်။ သိုက်ဆရာနှင့် ထိုလူငယ် ရို.သည် ကမ်းမမြင်သော ထိုရီပြင်ကျယ်ကြီးတွင် မိနစ် ၂၀ မျှဇောနှင့်ကူးခတ်ပြီးနောက် ကကောင်းညောင်းလာတက်ပြီး သီဘေးနှင့်ရင်ဆိုင်နိန်ကတ်ရလီသည်။
ဆလီဖက်ရန်ရွာမှ ကုလားတစ်စုသည် ဆင်ဒမော် ရွာတွင် ဆန်ရောင်းရန် ထိုတောင်သို. ဖြတ်ကျော်လာကတ်လီသည်။ ထိုကုလားများသည် နခြင်းကြောင်တောင် တောင်ထက်၌ ရီကူးနိန်သော ထိုလူ ၂၁ ယောက်အား မြင်သော် ဆို.အောင်ရယ်ကတ်လျက်၊ ပါးစ မှလည်း "လူရို. ကြည့်ချက်..ဟဟဟဟ... ရခိုင်ဆားတိ တောင်ထက်မှာ နခြင်းတတောင်ရီကူးနိန်ကတ်တေ၊ ကကောင်းရှုး ရေကာ ဟေဆူရို." ဟုအော်ပြောလိုက်လီသည်။ ထိုအသံကြောင့် သိုက်ဆရာ နှင့် လူငယ်တိ သတိပြန်ဝင်လာလျက် ရီများလည် အလိုအလျောက် ပျောက်ကွယ်လားလီသည်။ သွီးရဲရဲ၊သံရဲရဲ နှင့် အသက်ဘေးမှ အင်ဒန်ချေရာ လွတ်လားခသော ထိုလူ(၂၁) ၏ စိတ်ခံစားမူ အတွိအကြုံကို ထိုကုလားတိ နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Posted by KingMarayu at 20:570comments